Ngaphezulu kweendlela ze-60 Autolisp ze-AutoCAD-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Ngaphezulu kweenkqubo ze-60 Autolisp ze-AutoCAD
Lisp ukuguqulwa kunye nemisebenzi
1. Ukuguqula iinyawo ukuya kwiimitha kunye nenye indlela
Le ndlela eveliswa yi-Autolisp, ivumela ukuba siguqulwe ixabiso elifakwe ngaphakathi kwiinyawo ukuya kwiimitha kunye nangaphandle koko, isiphumo siboniswa kumgca womyalelo.
Apha kwakhona ukusebenzisa umsebenzi CVunit, lo msebenzi Teketa, amaxabiso ukuguqula wafumana, File acad.unt (Unit AutoCAD Ingcaciso), ukuba ufuna ukubona yonke into ezi amaxabiso kunye namazinga ahlukeneyo ukuguquka, Mna ndicebisa ubona le fayile .
Ukusebenzisa le nkqubo kufuneka wenze oku okulandelayo:
Ukulayisha ifayile ye-lisp kwi-AutoCAD.
Faka igama lomyalelo: PIM
Khetha uhlobo lokuguqulwa: Amanqanaba ukuya kumitha ukuya kwiimitha
Faka inani ofuna ukuguqula
Uya kufumana ulwazi kunye neenguqu zokuguqulwa kumgca wokula
Unokufumana isiqhelo apha
2. Uwandisa zonke iicatshulwa ezikhethiweyo
Le ndlela eveliswe kwi-AutoLisp ivumela ukufumana ukuphindaphinda kwazo zonke ixabiso leetekisi ezikhethiweyo, ukwenzela ukuba le migaqo isebenze ngokufanelekileyo kubalulekile ukuba iicatshulwa ezikhethiweyo zihlobo lwe-TEXT kwaye alukho uhlobo lwe-MTEXT.
Umzekelo, ukuba une izicatshulwa ezithathu 3 ngamnye kunye neenqobo: 1, 2, 3 ezikhethiweyo ezintathu, isiphumo umyalelo na ukuphinda ezi amanani amathathu, ilingana no: 6.
Faka igama lomyalelo: ezininzi
Khetha zonke iitekisi ofuna ukufumana ukuphindaphinda.
Cinezela iqhosha faka ukufumana umphumo.
3. Guqula amasentimitha ukuya kumitha
Esi simiso esincinci sisivumela ukuba siguqulwe ixabiso elifakwe kwii intshi ukuya kwiimitha ezibonisa umphumo kumgca womyalelo, kwakhona kubonisa umphumo ohlukaniswe yi-2 njengenxalenye yolwazi olongezelelweyo.
Ungakwazi ukuguqula lo myalelo ukuguqula ezinye iindidi zeeyunithi, ngenxa yoko kufuneka uguqule ikhowudi yomthombo, umzekelo, ukuguqula intshi ukuya kuma-centimeters o imizuzwana ngemizuzwana, kuba oku kunele ukutshintsha iiparitha zomsebenzi “Vuni“, kulo myalelo cvunit inezi parameters zilandelayo: “intshi” “imitha”, ngezi parameters, ixabiso elingenisiweyo liya kuthathwa njengee-intshi (ii-intshi) kwaye liya kuguqulwa libe kwiimitha (imitha), ungatshintsha iparameters kwi okulandelayo: "umzuzu" "okwesibini", "intshi" "cm", "acre" "sq yard", "ft" "in", phakathi kwezinye.
Faka igama lomyalelo: PM
Faka inani ofuna ukuguqula ukusuka kuma-intshi ukuya kumamitha kwaye
Ukwenziwe, uza kufumana ulwazi malunga nokuguqulwa kweeyunithi.
4. Yongeza ubude bemigca yoluhlu olukhethiweyo
Le ndlela ikuvumela ukuba ungeze imida yonke imigca equkethwe kwinqanaba lezinto ozikhethayo.
Le ndlela ikuvumela ukuba ungeze imida yonke imigca equkethwe kwicala lento oyikhethayo, ukuba iifollines zifumaneka kwi-layout ekhethiweyo, ziya kuhoywa.
Xa isixa semigca itholakale, umphumo uboniswa kwisikrini.
Faka igama lomyalelo: sumlcapa
Khetha umgca osekuhlaleni kwemigca ofuna ukuyongeza
Unokufumana isiqhelo i-USD 5.99 apha
5. Yongeza okanye ukhiphe ixabiso kwiimibhalo ezikhethiweyo
Le ndlela eyenziwe nge-AutoLisp ivumela ukuba sineze okanye shenxise iimpawu kwietekisi ezikhethiweyo.
Umzekelo, ukuba unemouse itekisi ezixabisa 5 kwaye usebenzise lo myalelo kwaye bangena 2 ixabiso, utshintsho okubhaliweyo okukhetiweyo, updated yi ixabiso 7, ukuba ixabiso -2 ebhalisele, okubhaliweyo iza kuhlaziywa 3.
Yenza oku kulandelayo ukusetyenziswa kwesi siqhelo.
Faka igama lomyalelo: vsr
Ibonisa ukubaluleka kokongeza okanye ukususa
Khetha izicatshulwa zokongeza okanye ukususa.
6. Fumana iindawo ezisuka kumacandelo omthunzi
Le ndlela ikuvumela ukuba ufumane indawo yee-shaded (shattered) izigaba zomnqamlezo kwaye usethe ixabiso elifumaneka kwiimpawu zeebhloko ezikhethiweyo.
I-shadings ekhethiweyo kufuneka ibe kuluhlu oluchaza uhlobo lwendawo enokufunyanwa, ngokungagqibekanga i-lisp iyakufunda amagama amabini amaleko, angala alandelayo: "Shading Cut"Kwaye"ShadingFill".
I-lisp ibala zonke iindawo zeeshadi ezikuluhlu "Shading Cut” kunye nazo zonke iindawo zomaleko shadings “ShadingFill"Kwaye nje ukuba ukhetho lweehatshi lugqityiwe, iimpawu zebhloko yeendawo zihlaziywa, ngenxa yoko uphawu oluqhubekayo lwebhloko kufuneka lukhethwe kuqala, olu luphawu olungabonakaliyo, kodwa i-lisp ngaphambi nje kokuba ukhetho lubonise kwaye emva koko uyifihle kwakhona, oku kwenziwa kusetyenziswa umyalelo "Attdisp", emva koko iimpawu zokusikwa kunye neendawo zokugcwalisa ziya kukhethwa kwaye ezi ziya kuhlaziywa ngamaxabiso eendawo ezifunyenweyo.
Ukukhethwa kwezinto kwenziwa ngefestile equka yonke imifanekiso equka icatshulwa yecandelo elihamba phambili.
Faka igama lomyalelo: I-AXA.
Khetha ngefestile yonke ukusika nokuzaliswa kwecandelo, kubandakanywa icatshulwa yenkqubela yecandelo.
Khetha omnye ngomnye iimpawu zebhloko ukuba ziguqulwe, ngokuqala ngembonakalo yenkqubela phambili.
Umyalelo uya kugqitywa ngokuzenzekelayo emva kokukhethwa kunye nokuzaliswa kweempawu ezikhethiweyo.
Ifayile ifayile yeCAD ifakiwe kunye ne-lisp yokuqonda okungcono umyalelo.
7. Fumana umthamo womgca okanye ipolline
Lo myalelo (u-Autolisp routine) ufumana ixabiso lentambo yomgca okanye i-polyline, ngaphezu koko ifumana ubude bomgca, ubude obude kunye nekota.
Unika uncedo olukhulu xa sifuna lawula amacici ethu, ukufumana umthamo, khetha kuphela umgca okanye i-polyline, umphumo ungaboniswa kwiskrini (umgca womyalelo) okanye ngokukhetha itekisi (ixabiso le tekisi liza kutshintsha ngexabiso lentaba efunyenweyo).
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kwimeko ye-polyline, lo myalelo ufumana umthamo wecandelo lokuqala kuphela.
Faka igama lomyalelo: pnd
Khetha umgca okanye ipolline ukuze ufumane umthamo.
Ukuba unqwenela, unokhetha itekisi ukubuyisela ixabiso layo kwinqanawa efunyenweyo, ngaphandle koko, kufuneka ucinezele kuphela faka ukufumana iziphumo kwisikrini.
8. INDLELA YOKUPHILA KWENKQUBO YOKUBA KUFUNEKA UKUTHETHA INTSHONA YAMININZI OKUHLULEKILEYO OKANYE NAMAPOLYLINES
It is generated kwimisebenzi SokufundaName ukuba ufumana udibaniso ubude kwimigca okanye polylines ekhethiweyo, kuphelela phi le mali ziya kusetwa ukuba isicatshulwa ngokukhetha okanye ngenye kuphela boniswa kwi kwilayini yomyalelo.
Ungakhetha imigca kunye ne-polylines ndawonye ndawonye ngefestile okanye enye enye.
Inani lezityalo ezidityanisiweyo ngokungafihli kwesibalo sobude obufunyenwe yi-2, kodwa enye ixabiso lingabonakaliswa.
Faka igama lomyalelo: lpl
Faka inani lezitshatyalali ngenxa yesiphumo sobude
Khetha imigca okanye iipollines ukuze ungeze ubude babo
Cinezela iqhosha faka ukugqiba ukhetho
Khetha isicatshulwa ukubuyisela ixabiso layo ngenani elifunyenweyo okanye cinezela faka kwakhona ukubonisa umphumo kumgca womyalelo
9. I-LISP ESEBENZEKILEYO EQHUBILEYO YOKUBHALISA ULUHLU LWEMITHETHO YOKUPHATHA
Yinkqubo encinane eyenza uluhlu kunye namagama azo zonke iziqalo zomzobo wangoku kwaye ubonisa umgca womyalelo.
Faka igama lomyalelo: lc
Isiphumo siya kuba uluhlu kumgca womyalelo wezo zonke iindawo zomzobo wangoku.
Sebenze kunye nezilungelelaniso
10. UQHUTYULO LWE-AUTOLISP OLUFAKA ITHEYIBHILE
Le ndlela ivelisa itafile kunye nenani elichaziweyo lemiqolo kunye neikholomu, iyafana nomyalelo wetafula we-AutoCAD, kodwa i-lighter iyayisebenzisa.
Esi siqhelo yenza itafile kunye nenani elichaziweyo lemigqa kunye neikholomu, lifana nomyalelo weThebula we-AutoCAD, kodwa i-lighter iyayisebenzisa, nangona ingaxinisi idatha kunye ne-Excel Unenketho yokugcwalisa itafile ngexabiso elichazwe ngaphambili leyo ngokungagqibekanga ingu “0.00” kwaye ibekwe kwiseli nganye ukuze ihlelwe mva.
Lo myalelo nawo ivumela ukuvelisa itafile ngeendlela ezimbini, ukhetho lokuqala luvumela ukuchaza itafile ngobude obude kunye nobubanzi beeseli kunye nenye indlela Lungisa ezi ngundoqo ukwenzela ukuba inani elichaziweyo lemiqolo kunye namakholomu ungene ekutyunjweni kwefestile.
Njengeenketho ezongezelelweyo, zilandelayo:
Umbhalo ongezantsi: Ungaxelela umyalelo wokufaka ixabiso elingagqibekanga (“0.00”) kwiseli nganye eyenziweyo, eli xabiso linokwenziwa ngokwezifiso kwaye lingatshintshwa nakweyiphi na enye.
Ukuphakama kombhalo: Bubude obuya kubanabo umbhalo ofakiweyo, ukuphakama okungagqibekanga kunexabiso elithi "0.25".
Ukulungiswa: yombhalo ofakiwe, ngoko kukho iindlela ezimbini: kufanelekile (Faka kwiseli) kwaye Ephakathi (isiqingatha seeseli).
umbala: Umbala ukuba iicatshulwa ezifakiwe ziza kuba, ngokungagqibekanga umbala wokuqala ngumbala okhoyo ochaziweyo.
Faka igama lomyalelo: Uluhlu
Ngokwemoya yesizukulwana esikhethiweyo, iphuzu liboniswe okanye amanqaku amabini aboniswe ukuvelisa ifestile
Imizila ye-Lisp yokusebenzisana ne-Excel
11. Ukuthumela ngaphandle Ulungelelaniso lweenkcukacha kwifayili ye-CSV
Le ndlela eveliswe yi-Autolisp, ikuvumela ukuba uthumele amanqaku okulungelelanisa kwifayile ye-Microsoft Excel CSV. Izinto ozokwazi ukuzithumela ezi ngqungquthela ngamaphuzu, izicatshulwa kunye neebhloko, zikhethe kuphela kwaye zibonise ifayile yokuya kuyo.
Kufuneka kube nekhethekileyo uqaphele ukuba izinto zibhalwe, ukususela kwinqanaba lokufaka ingqalelo xa kuthengiswa izilungiso, kuxhomekeke kwisicatshulwa sokuba ezi zibhalo zikhona, ukuba unesiqiniseko sokuba ukulungiswa kweetekisi kuchanekileyo akukho nto ingxaki ekuthumeleleni amaphuzu.
Kucetyiswa ukuba ukhethe izinto elineenkalo enye yokufaka, ezifana iibhloko okanye amanqaku e-AutoCAD, ngaloo ndlela ikhuselekile ukuba ukulungelelaniswa kwamanye amazwe kuhambelana.
Njengoko sitshilo ekuqaleni, le mihla yokuthumela ngaphandle iqukumbela kumaphuzu, itekisi (okanye i-Mtext) kunye neebhloko, kodwa unokuqulunqa ikhowudi yomthombo ukuqwalasela ezinye iinkampani ngokomzekelo: izibonda, amanqaku okuqala emigca, phakathi kwezinye izinto ukuba kwi-database yakho inekhowudi ye-10.
Ukulungiswa kwee-exports kufomati P, N, E, C (Point, North = Y, East = X, Ukuphakama = Z) kwaye njengoko ithunyelwa kwifayili ye-CSV (ihlukaniswe ngama-commas), xa uvula ifayile nganye ixabiso liza kuthatha iseli layo elizimeleyo.
Ukusebenzisa isiqhelo kufuneka wenze oku okulandelayo:
Faka igama lomyalelo: EPC
Khetha izinto apho izilungelelaniso ziya kuthunyelwa ngaphandle (gcina ingqalelo ukuba uya kukhetha amanqaku, izicatshulwa kunye neebhloko (ukuba uyazifumana).
Ibonisa indawo kunye negama lefayile ye-CSV apho ulungelelwaniso lwangaphandle luya kwenziwa.
12. IINKCUKACHA ZOKUPHATHISWA KWEMIGAQO YOKUBA IXHUMA IINKCUKACHA ZEMPENDULO KWI-CSV FILE
Lo mkhuba oqalwe AutoLISP for AutoCAD, oko likuvumela ukuba urhwebe ngaphandle amanqaku ilungelelanise ngayo iziphelo imigca esikhethiweyo kwifayile Microsoft Excel CSV
Ukulungelelaniswa okuthengisiweyo kuhambelana iqalo lokugqibela kunye neyokuphela kwemigca, ngoko kwimeko yemigca iyahlanganiswa ngombala ofanayo, i-lisp iza kufunda ii-2 ngamaxesha okudibanisa okufanayo.
Kule meko, ukuba ufuna Inketho yokuyalela iinqununu kufuneka iqwalaselwe kunye nokuphelisa ezo ziphindiwe, ukulungelelaniswa kwamanye amazwe kunye Ifom ye-P, N, E, C (i-Point, North = Y, East = X, Ukuphakama = Z) nendlela ekuthunyelwa ngayo kwi Ifayile ye CSV (ehlukaniswe ngama-commas), xa uvula ifayile nganye ixabiso liya kuhlala kwiseli yalo emele kwaye ngendlela ehlelekile.
Faka igama lomyalelo: EL3
Khetha imida apho iinqununu zokuqala kunye neyokugqibela ziza kuthunyelwa.
Ibonisa indawo kunye negama lefayile ye-CSV apho ukulungiswa kwee-exported ziza kwenziwa.
13. I-LISP YOKUPHILA KWI-LISP KWIINGXELO EZIBALULEKILEYO KWI-COORDINATES E-MICROSOFT EXCEL
Lo mkhuba oqalwe ukuze zisetyenziswe AutoCAD kunye izicelo zayo nkqo avumela ukuba kuzakulungisa uququzelelo iingongoma ifayile Microsoft Excel, kwesi siqhelo akuyomfuneko ukukhankanya iinkcukacha ezinxulumene kwifayili yokungenisa, kwanga ujongano lwawo iinketho ezikhoyo kuyimfuneko ukungenisa ezi ngongoma ngokweendlela ofuna ngayo.
Ukungenisa amaqaku, kucingwa Kubalulekile ukuba ifayile yeengongoma zingeniswe kwi-XLS extension (ukusuka kwiinguqu zangaphambili ukuya kwi-office 2007) okanye ukongezwa kwe-XLSX (i-2007 okanye ilandelayo) kwaye kwifayile iinqununu zifomathiweyo ngefomethi: P, N, E, C, D, (Pkuye, Ni-orte, Eke, Cota, Dubhaliso), njengoko umfanekiso olandelayo ubonisa:
Ikuvumela ukuba ukhethe phakathi kweendlela ezahlukeneyo ze-3 zokufaka into ephambili kwindawo yokufunda.
Eyokuqala kukukhetha ukufaka ifayile ye- iqumrhu le-AutoCAD iphuzu (owenziwe ngumyalelo we-POINT), khumbula ukuba ukubonakaliswa kwendawo kwi-AutoCAD kuxhomekeke kwindlela yokubonisa indawo oye uchaze ngayo ngomyalelo weDDPTYPE.
Inketho yesibini ibandakanya ukhethe ibhloko egcinwe kumzobo njengenqaku eliza kufakwa kwi-coordination efundwayo, ngokungagqibekanga inkqubo idala ibhloko entsha ebizwa ngokuthi "i-cg-point", enokusetyenziswa ukuba kukho iibhloko kumzobo okanye ukuba akukho zibhloko kumzobo.
Inketho yesithathu ehambelana nesitayela, vumela ukungenisa ibhloko kwi disk ekhuni, khumbula ukuba kulo mzekelo ubukhulu bendawo eyakhiweyo buchaphazela ukubonakala kwayo xa kufakwe.
Ngokumalunga neenkcukacha zendawo (amalebula), iCe ikuvumela ukuba wenze isigqibo sokuba ufuna ukubonisa ntoni, ukuba ufuna kuphela ukubonisa iNdawo, kuya kukwanela ukuba ukhethe kuphela olu khetho, olufanayo kwisicatshulwa soBungakanani okanye Inkcazo yeli nqaku. Unokukhetha ukubonisa idatha yeetayiti ye-3 okanye ungabonakali nayiphi na.
Kwakhona Ungakwazi ukulawula inani leempawu zokubhaliweyo kwenkcazo yesimo esifakwe, isilinganisi esiya kuba nelebula, ukujikelezwa kwesinye isiseko sayo esendaweni yendawo yokungeniswa kunye nokwahlukana kwelebula ngokubhekiselele kwinqanaba, ezi zikhethi zingagcinwa negama, ukuze ubenokuzibiza ngoko iingongoma ozithengayo.
Zonke ezi zikhetho ziya kukuvumela ukuba ungenise amaphupha akho kwifayile ye-Excel ngendlela yokukhawuleza kwaye ngokubonakala ngokucacileyo, kulungele ukucacisa ukuba indlela obona ngayo itekisi yebhile yileta ayixhomekeke kwisiganeko, kodwa isitayela yangoku yombhalo wakho wokudweba kunye nobume obukhoyo.
Abanye ixesha eyadlulayo I eshicilelwe yesiqhelo olwakhiwe njengomsebenzisi, kodwa wavumela ukungenisa likwajongana kwifayile yombhalo kodwa nokulinganiselwa amaninzi, eli xesha usebenzisa lo myalelo omtsha iza kuba iinketho ezininzi ukulawula uququzelelo indawo yokufaka umfanekiso.
Le fayile iqhotyoshelweyo ikwabonelela ngomzekelo webhloko onokungenisa kuwo, ngaphandle kwepredishithi enefomathi echanekileyo efunwa ngumyalelo wokungenisa izilungelelwaniso ngaphandle kokuphazamiseka.
Faka igama lomyalelo: ICE
Kwibhokisi yencoko, cacisa iinketho ocinga ukuba zilungele ukungenisa ezi ngongoma.
14. Ukungenisa indawo ukusuka kwifayile ye-csv ukuya kwiinqanaba
Lo myalelo uvumela ukuba ungenise iindawo (ngokuchithwa komgca uze uzalise) ukuwela iinqonga zomhlaba, indawo ekufuneka zingeniswe kuyo kufuneka zibe kwifayile ngefomathi ye-CSV (ehlanjululwe yi-commas), ngokwefayile yesampuli eqhotyoshelweyo.
Lo myalelo ufunda intuthuko ekhoyo kwikholomu yokuqala yefayile ye-csv kwaye ikhangele itekisi kunye neyo fanayo eqhubekayo kwifayile yokudweba, ufaka indawo yayo yokusika kunye nokugcwalisa kwindawo ephezulu yesigqeba.
Izimamva ezifakwe kwindawo yokusika kunye nokuzaliswa ngokungagqibekanga zezi: “AC=” kunye “ne-AR=”, ezinokuthi zijikwe ngekhowudi, kunye nenani leedesimali kunye nobude bombhalo ofakiweyo.
Imisela ngokwangoku umaleko oza kuqulatha iitekisi eziza kufakwa, umzekelo: "IiNdawo zeSibhalo".
Faka igama lomyalelo: arimx
Khetha ifayile ye-SCV equle imimandla engeniswe kuyo
Khetha inkqubela phambili ofuna ukuyifaka indawo ehambelana nayo kwifayile ye csv, ukuba ufuna ukukhetha yonke into cofa iqhosha Ngena
15. Bhala uluhlu lweemifanekiso ezifakwe kumzobo
Ukuba usebenza nemifanekiso, kuya kufuneka ukuba kuvelwe uluhlu lwazo, kubandakanywa indlela yakho yendawo, kunye nale ndlela uyenzela ukuvelisa uluhlu kunye nemizila yazo yonke imifanekiso efakwe kumdwebo wamanje.
Le ndlela ayifuni ukungena nayiphi na inketho, vele ubize umyalelo kwaye kuya kubakho ngokukhawuleza kuboniswe kumgca we-AutoCAD umyalelo, uluhlu ngeendlela zemifanekiso efakweyo.
Faka igama lomyalelo: Lima
16. Yenza isicatshulwa kunye nefayile yangoku
Le nkqubo iqhutywe kwi-Autolisp, ivumela ukuba sihlaziye nayiphi na itekisi, kunye nomendo kunye negama lefayile yangoku.
Yiluncedo oluhle xa kuhlaziywa iileta zamaphepha ezi cwangciso ngolwazi.
Kwindlela efunyenweyo ikwabandakanya negama lethebhu yangoku, ukuba kusekwimodeli yendawo, iya kubonisa ekupheleni kwendlela: imodeli, ngaphandle koko iya kubonisa egameni lethebhu yangoku.
Faka igama lomyalelo: indlela
Khetha isicatshulwa esiya kutshintshwa kunye nenani lomendo womzobo wangoku, ukuba awufuni ukufaka indawo ethile yombhalo nje cinezela faka ukubonisa indlela kwilayini lomyalelo.
17. Ukubeka indawo itekisi ekhethiweyo ngumhla okwangoku kunye neefomati ezivelisiweyo
Ngokuncedwa kwesi sihlandlo esihle singathatha indawo nayiphi na itekisi, ngexabiso lexesha langoku.
Umyalelo unikeza ii-8 iintlobo ezahlukeneyo zefomathi zalo mhla, ukusuka kumhlobo onomhla olula, uhlobo lwangokuhlobo lwexesha elide, apho igama lomhla okhoyo wangoku lufumaneka ngohlelo nge-AutoLisp.
Uhlobo lwenkonzo lunokukhethwa Umbhalo y UmxholoEzi iya ngokuzenzekelayo indawo umhla wangoku kwi fomati ekhethiweyo, iifomati umhla ekhoyo zezo kubonisiwe kulo mzekeliso, ngamnye lubonwa inombolo yaso, eziza kwenza ukuba ukhethe ifomati xa eceliwe kwilayini yomyalelo AutoCAD.
Faka igama lomyalelo: RF
Bonisa ngenombolo ye-1 kwi-8, ifomathi yokuphuma komhla, ungangenisa uphawu lombuzo (?), ukubonisa ifomathi zomhla ezikhoyo
Khetha izicatshulwa ofuna ukuzitshintsha ngomhla kunye nefomathi ekhethiweyo
Cinezela iqhosha faka ukugqiba umyalelo nokuhlaziya iitekisi ezikhethiweyo
18. ULAWULO LWENTSHONA KWE-LISP UKUVIWA OKANYE OKUQINISELWA NGEZIKHOKELO EZIKHETHIWEYO
Ngamanye amaxesha sifuna ukuguqula imilinganiselo yeetekisi ezimbini, umzekelo, ukuba umbhalo we-1346 uba yi-1111 kwaye ngokuphambene naso, le ndlela ivumela ukuba sibhale ixabiso leetekisi ezikhethiweyo.
Ukufezekisa le miphumo, kwanele ukubonisa iibhalo ezimbini, enye emva komnye.
Faka igama lomyalelo: Umzila
Khetha iibhalo ezimbini ukuba zitshintshwe.
19. IINDLELA ZOKUPHILA OKUQHELEKILEYO KWI-TEXTE NGEMIGAQO EPHAKILEYO
Lo myalelo omtsha ufumana ixabiso lentambo (Y ulungelelaniso) kwinqanaba elibonisiweyo kwaye uyilungisa njengomxholo weetekisi ezikhethiweyo.
Le ndlela iyanceda kakhulu umzekelo xa sisebenza kunye neeprofayili zomhlaba kwaye sifuna ukufumana ukuphakama kwe-vertex kwaye siyifake kwelinye leetekisi ezibonisa umgangatho welizwe, inokusetyenziswa kwakhona xa isebenza ngamacandelwana omhlaba kwaye sifuna ukufumana ixabiso lesilinganiselo kwi-axis yecandelo kwaye silisuse kwisicatshulwa esiza kubonisa ukuba ixabiso lento.
Kulo myalelo ungabonisa ukuba yeyiphi na umlinganiselo oza kuba nomlinganiselo wokubekwa kwisicatshulwa, akusiyo ukuphakama kwetheksthi ekhethiweyo, kodwa isilinganisi esinesiprofayile okanye icandelo ukuba sibonise, ukuba iprofayili yakho umzekelo i-10 amaxesha kwisigxina, kufuneka ubeke njengesilinganiselo kwisilinganiselo kumyalelo we-NC we-10, ukuze ngaloo ndlela umyalelo wenze ulwahlulo oluhambelanayo kwaye umise ixabiso elifanelekileyo kwisicatshulwa esikhethiweyo.
Faka igama lomyalelo: NC
Bonisa umlinganiselo oza kuba nawo
Faka inani leetemimali eziza kuba netawulingi kunye neqondo elifunyenweyo (3 ngokungafani)
Bonisa indawo ofuna ukufumana ngayo ukuphakama kunye
Khetha icatshulwa eliya kutshintshwa lixabiso lezinga elifunyenweyo okanye ukuba unqwenela ukuba uncofe iqhosha faka ukubonisa kuphela inqanaba elifumanekayo ngaphandle kokushiya nayiphi na itekisi
20. IITEKISI kwesiqhelo UKUTSHINTSHA FOR Progressive kunye nezinye ne-COTA kuboniswe ngokongeza isimaphambili okanye isimamva
Lo myalelo uvumela ukuba ufumane ixabiso eliqhubekayo kunye nemilinganiselo (ixabiso le-X kunye ne-Y) yendawo ebonisiweyo kwaye uyifake kwiimibhalo ezikhethiweyo ze-2.
Ukongeza kwisicatshulwa ngasinye yongeza isimaphambili okanye isimamva, umzekelo ukuba isimaphambili sibonisiwe kubungakanani (Y ulungelelaniso) olingana no "CT=", xa kukhethwa umbhalo wokuphakama, umyalelo uya kuhlaziya okubhaliweyo okukhethiweyo ngexabiso lokuphakama okufunyenweyo, kunye nesiqalo esibonisiweyo, umzekelo "CT=236.42", xa umbhalo oqhubekayo ukhethiwe, uya kuhlaziywa ngexabiso. ka-X ulungelelwaniso olufunyenweyo kunye nesimamva "0+", umzekelo "0+10.0".
Lo myalelo uza kunye neziqendu zokuqhubela phambili kunye nobukhulu obuchazwe ngaphambili ("0 +" kunye "CT =") kwaye zinokutshintshwa kuphela ngokuguqula ikhowudi yomthombo, ngaphezu koko lo myalelo unokuguqulwa ukuba unqwenela, ukwenzela ukuba isiqalo kunye nesisombululo zongezelelwe ngexesha elifanayo kwiicatshulwa.
Faka igama lomyalelo: PC
Ibonisa ingongoma apho ixabiso lokuqhubela phambili (X ulungelelaniso) kunye nokulungelelanisa kuya kufumaneka (Y ulungelelaniso)
Khetha umxholo wenkqubela phambili
Khetha umxholo wesicatshulwa
Ixabiso leetekisi liya kuhlaziywa kunye nedatha efunyenweyo
21. I-AUTOLISP YOKUSEBENZISA UKUQALA IKOTA YOKUPHAKATHI KWI-POINTI EPHAKILEYO
Yinto eqhelekileyo eyenziwe kwi-Autolisp esivumela ukuba sibeke ixabiso loqhagamshelwano (Y ulungelelaniso) kwinqanaba elithile.
Lo myalelo ucela idatha (amanqaku kunye namaxabiso) kwaye wenza imisebenzi ukuze ufumane ixabiso lokugqibela eliya kusekwa kwi-Y yokulungiswa kwendawo ebonisiweyo (utshintshe ixabiso le-UCS (i-Universal Coordinate System) kwinqanaba eliboniswe lixabiso elifakiwe. ).
Layisha ifayile kwi-AutoCAD usebenzisa umyalelo I-APPLOAD okanye ukukopisha ifayile kwaye uyifake kwi-AutoCAD.
Faka igama lomyalelo: OS
Ngaphambi kwesicelo sokubonisa iphuzu lokuphakama, kufuneka ubonise inqaku kwisikrini (indawo apho ufuna ukubeka khona umlinganiselo othile).
Umyalelo uya kucela ukuba ufake ixabiso lesilinganiselo ukusetha okanye ukhethe umbhalo:
Lapha kufuneka ungene kwixabiso lesilinganiselo ofuna ukuba i-Y idibanise ukuba ibe nayo kwinqanaba elibonisiweyo, ungangenisa ixabiso okanye ungakhetha itekisi equlethe ukubaluleka kwexabiso, umyalelo uya kufumana kuphela inani lokubala xa itekisi nayo inenkcazelo.
Ukuqinisekisa ukuba ubukhulu obufakwe kwikhowudi ebonisiweyo luye lwasekwa, yenza umyalelo we-ID, bonisa i ngongoma, kwaye ugcine umgca womyalelo ukuba ixabiso le-Y lilungele ngoku lixabiso.
22. I-AREASX: I-LISP YOKUPHUMA IINDLELA ZOKUTHOLA IZINDAWO NGEZINDAWO
Lo myalelo uvumela ukuba ufumane iinkalo ezibonisa indawo yangaphakathi phakathi kwezinto okanye ngokukhetha umgca ovaliweyo, lo myalelo ubonisa indawo efunyenwe okanye yenzeke ngenye itekisi ekhethiweyo.
Umyalelo we-Ax unokukhetha okulandelayo:
Chaza indawo yangaphakathi yommandla okanye [Khetha into / Khetha] :
Apha umele ubonise amaphulo angaphakathi apho ummandla uya kufumaneka khona, ezinye iinketho zichazwe ngezantsi:
Khetha into: Esikhundleni sokubonisa iingongoma zangaphakathi ukufumana indawo, usebenzisa olu khetho ungakhetha iipolgoni ezivaliweyo ukufumana indawo yakho.
Khetha: Olu khetho luthwala ibhokisi yencoko ye-Command Options, ibhokisi yencoko yababhali:
Inketho nganye ichazwe ngezantsi:
Inani lezintlu: Inani lezityalo eziza kuthiwa (i-2 ngokuzenzekelayo).
Ukuphakama kwesicatshulwa ukuba kufakwe: Ukuba unquma ukufaka isicatshulwa kwindawo efunyenweyo, ukuphakama kwesicatshulwa kuya kusekwa apha.
Ukuguqulwa kweendawo: Olu khetho likuvumela imisebenzi kunye neendawo amaxabiso efumaneka, indawo nganye uya kongeza, uthabathe, nande okanye umsantsa ngu into ekufuneka icaciswe emazantsi olu khetho.
Umyalelo ubonisa ukuba uguquko luyasebenza kwaye yeyiphi imisebenzi eyenziwayo kwaye ngexabiso elingakanani uguquko luya kwenziwa.
Olu khetho lukuvumela ukuba wenze ngokwezifiso imimandla xa umzobo usezikali ezahlukeneyo okanye kwezinye iiyunithi zokudweba.
Faka isicelo se-shading: Olu khetho luvumela indawo nganye ebonisiweyo ukuba ifakwe emthunzini ukuze ibe nombono ongcono kummandla ofunyenweyo, ngaloo ndlela uvumelekile ukuba uqinisekise ukuba kuchanekile (Kuqhutyelwe ngokusilelayo).
Igama le-shading: Lapha kufuneka ubonise igama le-shading eya kusetyenziswa kwiindawo ezibonisiweyo
Isikali (somthunzi): Nantsi umlinganiselo we-shading ukhonjisiwe, le nto inokuhluka ngohlobo oluthile lwe-shading ekhethiweyo.
Umbala (shading): Umbala oza kufakwa kwi-shading kuyo.
Ukugqiba umthunzi: Izinketho ezingezantsi zisebenza emva kokuba isicelo sesicelo sigqityiwe.
Gcina i intambo: Ukuba isebenze, izithako ezivelisiweyo azisuswanga.
Ukugcina umthunzi: Ukuba isebenze, i-shaders eyenziwe ayinakususwa.
Chaza indawo yangaphakathi yommandla okanye [Khetha into / Faka indawo yombhalo / Khetha] :
Faka indawo yombhalo: Olu khetho likuvumela ukuba ufake okubhaliweyo nge ariya efunyenweyo endaweni yokukhetha enye oza kuyibuyisela. Isicatshulwa esinendawo efunyenweyo sinesiqalo esingagqibekanga: ” Indawo =”, esi simaphambili sinokulungiswa kwikhowudi yenkqubo.
Tshintsha umbhalo: Olu khetho luvulwa xa iqhosha elithi Ngena licinezelwe okanye iqhosha lemouse lasekunene licinezelwe, eliya kucela okubhaliweyo ukuba kukhethwe, umzekelo ukuba kukho umbhalo onomxholo olandelayo: “AC=0.00m2” kwaye ngomyalelo i indawo ye-3.25 ifunyenwe, emva koko umyalelo uya kuthatha indawo yokubhaliweyo, ukuyihlaziya "AC = 3.25m2". Njengoko ubona, i-AX ibuyisela kuphela amanani amanani ombhalo oza kutshintshwa, ukuze ube nezicatshulwa zendawo ezinezimaphambili ezahlukeneyo, umzekelo: “AR=0.00m2”, “AM=0.00m2”, “Indawo yokusika. =0.00m2”, “Ummandla wam=0.00m2”, njl.
Iingqinamba ezifanelekileyo kunye ezingavumelekanga:
Faka igama lomyalelo: AX
Bonisa indawo yangaphakathi kwindawo ofuna ukuyifumana (kufuneka uqinisekise ukuba indawo ekufunyenweyo kufuneka ivalwe ngokupheleleyo, ngaphandle koko umyalelo uza kubonisa umyalezo wephutha).
Bonisa amanqaku angaphakathi ngamaxesha amaninzi njengoko ufuna, umyalelo uya kuthukuthela, ukuqokelela (ukongezelela) zonke iindawo ezifunyenweyo.
Cindezela Faka okanye ucofa iqhosha ukuvala umyalelo kwaye usethe indawo kwindawo ekhoyo.
23. Khetha zonke iinkcukacha zobunqamle bezinto ezikhethiweyo
Le ucwangciso amancinci yenza okufanayo njengoko ezidlulileyo, umahluko kukuba apha igama umaleko ukukhetha izinto kungene, kodwa iziko ezinqwenelekayo igama umaleko ikhethiwe.
Njengakwindlela yangaphambili, ukhetho lwamaziko alwenziwa lubonakale, kodwa lukhona njengeseti yezinto ezikhethiweyo, ngoko ke indlela yokukhetha kufuneka iboniswe “egqithileyo” ukukhetha izinto.
Faka igama lomyalelo: SSL
Khetha into apho ufuna ukufumana igama loluhlu ukuze ukhethe amanye amashishini
Yenza ukhetho lokusebenza lusebenze ngemodi ye-previuos
24. Susa izinto zangaphakathi okanye zangaphandle kwi-polyline ekhethiweyo
Ukusebenzisa lo mkhuba ungasusa izinto ezisemgangathweni okanye yangaphandle kwipolline ekhethiweyo, ukuba ukhetho olukhethiweyo lubonisiwe, izinto ezidibeneyo yi-polyline ziya kunqunyulwa ngecala elibonisiweyo.
Xa kuziwa ekupheliseni izinto ngaphandle kwe-polyline, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ekhethekileyo Lo myalelo ususa zonke izinto ezingaphandle kwe-polyline.
I-polyline ukukhetha Kumele kube yi-polyline evaliweyo, ukuba kungenjalo umgaqo ujoyina indawo yokugqibela yecandelo kunye neyokuqala, ngaloo ndlela kuvaliwe ngumgca ocingayo i-polyline kunye nokuphelisa yonke into engaphakathi okanye ngaphandle kwaloo mgca.
Inketho yokunquma njengento enengqiqo, isebenza kuphela ngezinto ezinokuqalwa ngesandla, umzekelo, imigca, izangqa, iiarcs, njl.njl, iibhloko kunye nezinye izinto ezihlanganisiweyo azilingani ngaphakathi kwezi zinto zinokunqunyulwa.
Ngeli lisp umzekelo ifayile iqhotyoshelweyo ukwenzela ukuba iimvavanyo ezihambelanayo zenziwe ngaphambi kokusebenzisa umyalelo kwiifayile zokugqibela.
Faka igama lomyalelo: PolErase
Khetha i polyline oya kuba ngumgca wokudibanisa izinto ukuba zisuswe.
Khetha enye inketho indlela yokucima izinto, unokukhetha ukhetho: Ifowuni (cima kuphela izinto ezingaphandle okanye ngaphakathi kwifestile), Ukuthathwa (kuphelisa izinto ezidibeneyo ngaphaya kwe-polyline), Cima kwaye Usike (Njengoko igama lichaza, liya kususa izinto ezingaphakathi okanye ngaphandle kwe-polyline kwaye ziyakunqumla izinto ezidibeneyo.
U bonisa a kwinqanaba apho (zangaphakathi / zangaphandle) izinto ziya kususwa okanye zihlanjwe.
25. Ikuvumela ukuba ukhethe zonke iinkcukacha zobume obungenisiweyo
Yindlela yokuvumela ukuba ukhethe zonke izinto ezikuloluhlu olubonisiweyo, alubonakali umbala okanye omnye umhlaba onokuba negunya.
Le nkqubo ayikho imeko ecaleni xa ingena igama loluhlu, ngoko ingenwa ngandlela-thile, kwanele ukuba ibhaliwe kakuhle.
Faka igama lomyalelo: sca
Faka igama loluhlu lwezinto ofuna ukukhetha
Yenza ukhetho lokukhetha lusebenze ngemo previuos
26. Kopisha umxholo wesicatshulwa kwenye itekisi
Yinto eqhelekileyo eyenziwa ngolwimi lweprogram yokuzimela, lisivumela ukuba siyikopishe umxholo wesicatshulwa esikhethiweyo, kwaye siqinisekise ukuba ixabiso lithile kwisicatshulwa sesibini ukuba sikhethwe.
Ukusebenzisa le ndlela, kufuneka wenze oku okulandelayo:
Ukulayisha ifayile ye-lisp kwi-AutoCAD, ngokusebenzisa umyalelo Ukulayisha okanye umane ukopishe ifayile kwaye udlulise kwi-AutoCAD.
Faka igama lomyalelo: RT
Khetha umbhalo, apho ufuna ukufumana ixabiso.
Khetha icatshulwa, ofuna ukuyibuyisela kuyo kunye nexabiso elifunyenwe ngaphambili.
Njengoko uyakubona, isiqhelo silula, kodwa sinceda gqitha xa kuvela ukulungiswa kombhalo.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ulwimi olusetyenziswa kulo mgaqo ngokucacileyo lu-AutoLisp, ekungeneni okutsha siya kushicilela umyalelo ofanayo kodwa sibhalwe kwi-VisualLisp, apho siya kugcina ukuba ubungakanani besakhiwo buncitshiswa.
27. Shintsha inombolo yokugqibela yesicatshulwa ngaphandle kokulahlekelwa ixabiso langaphambili
Isiqhelo solu hlelo luvumela ukuba utshintshe inani lezitshatsheli zeetekisi ezikhethiweyo ngaphandle kokulahlekelwa inani lokuqala lezitshatyalali, kwaye unokubonisa inombolo ngokulandelana kwe-2, kodwa ngaphakathi uya kuba nepropati entsha kunye nenani elichazwe okokuqala.
Le propati entsha inokufumaneka kuphela kulo myalelo, kuba ayibhalwa kwibhokisi yencoko yencoko.
I-lisp ikuvumela ukuba utshintshe inani lama-decimals okanye ufumane inombolo yokuqala yombhalo ofomathiweyo ngaphambili ngale ndlela, ngoko uza kuqonda ukuba zininzi izidumbu ezazisuka ekuqaleni ukuba ufuna ukubuyisela iimpawu zokuqala zazo.
Kuyaphawuleka ukuba ezi ziqobo zisekhona nangona ifayile okanye i-AutoCAD ivaliwe, ngoko uya kuba nekhuseleko le data yasekuqaleni ixabiso lakho liya kuhlala likhona, nangona ukubuyiselwa kwemilinganiselo yasekuqaleni kwiibhalo.
Umyalelo omtsha unokuthelekiswa nenyathelo kutshintsha ii-Excel, kodwa okukuphela kokukubona kukuba le propati ingaphakathi kwaye njengoko satsho ngaphambili Iifayile zemihlaba ayilungele ukubonisa idatha edlulileyo yamashishini.
Kufuneka kube nokuqwalaselwa okhethekileyo kuloo nto iicatshulwa ezikhethiweyo zibhaliweyo, oko kukuthi, ziqulathe amanani kuphela, kuba kungenjalo ixabiso lazo liyakuguqulwa libe “0.00".
Faka igama lomyalelo: AREDE
Khetha enye yezikhetho ofuna ukuzenza
Khetha iitekisi (iinombolo) apho unqwenela khona ukwenza umsebenzi
28. Ukulungelelanisa imixholo emininzi ngokusekelwe kwinqununu yokuqala
Ngokuqhelekileyo iqhutywe nge-AutoLisp evumela ukuba sihambelane neetekisi ezininzi ngokusekelwe kwinqununu yokuqala.
le nkqubo ikuvumela ukuba ulungelelanise iitekisi ngokugqithiseleyo (iikholomu) okanye ngokulandelanayo (imigqa), ngenxa yoko kufuneka ukhethe kuphela owokuqala, oya kuba ngumgaqo wokulungelelanisa ezinye iitekisi.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba inqaku elithathwa njengesiseko sokulungelelanisa iitekisi yindawo yokufakela, ukuba zonke izicatshulwa zine "Ekhohlo" ulungelelwaniso njengendawo yokufaka, zonke ziya kulungelelaniswa ngokubhekiselele kule ngongoma kwaye iya kuba. ulungelelwaniso olufanayo. Ukuba iitekisi zinezizathu ezahlukeneyo, zonke ziya kulungelelaniswa ngokubhekiselele kwindawo yazo yokufaka, eya kubangela ukuba ukulungelelaniswa kweetekisi kungahambelani.
Faka igama lomyalelo: wat
Khetha isicatshulwa esisezantsi apho i-axis axis ifumaneka khona
Khetha iitekisi ezihambelana
Eyenziwe, iicatshulwa zilungelelaniswe ngokusekelwe kwinqununu yokuqala
29. Khuphela ukuphakama kwesicatshulwa uze uyibeke kwezinye iimibhalo ezikhethiweyo
Le ndlela idalwe kwi-AutoLisp ikopi ephakamileyo yombhalo okhethiweyo kwaye uyayifaka kwiimibhalo ezikhethiweyo kamva, ukuguqula ubude ababenabo.
Umzekelo, ukuba une iitekisi 3, owayesakuba unalo kubude 3 kunye ezimbini ezilandelayo kufuneka kubude 6 kwaye ufuna yesibini ezimbini babe kubude 3 kunokuba 6, khetha nje umbhalo wokuqala ephakeme 3 koko izicatshulwa ukuba 6 ukuphakama.
Faka igama lomyalelo: CA
Khetha umbhalo ophakamileyo owufuna ukukopa okanye ukusetha.
Khetha izicatshulwa ofuna ukutshintsha ukuphakama ngohlobo olukhethiweyo
30. Khetha isicatshulwa uze usethe ixabiso elifunyenwe kwisibalo sebhloko
Le nkqubo eyenziwe kwi-Autolisp ne-Visual Lisp, ikuvumela ukuba ukhethe umbhalo, ikopi ixabiso lequlatho kwaye uyibeke (ubuyekezekisi) kwisigqibo esiyinxalenye yebhloko.
Okokuthi, ukuba sifuna ukuhlaziya umxholo weliphi ibhloko, kwitekisi ekhoyo, ngokwaneleyo ukuba ukhethe okokuqala umxholo uze uhlaziywe ngokwexabiso lentetho ekhethiweyo.
Faka igama lomyalelo: cta
Khetha isicatshulwa esinexabiso elokukopishwa.
kwaye ekugqibeleni ukhethe umlinganiselo wokutshintsha umlinganiselo
Njengoko sikwazi ukubona, lo myalelo uncedo gqitha ukuba sifuna ukuhlaziya ixabiso lempawu ukusuka kwithekisi ethile.
31. Sitshintsha ukuphakama kweetekisi ngokubhekiselele kwipesenti
Le ndlela eveliswa kwi-AutoLisp isenza sikwazi ukuguqula iindawo eziphakamileyo zeetekisi ezikhethiweyo ngokuziguqula ngokwepesenti efikile.
Umzekelo xa kufuneka iitekisi ezimbini, enye phezulu enye kunye 0.5 ubude 1.00 umyalelo kwaye ongena ipesenti 1.5, ezintlomeni izicatshulwa kutshintshwe ezi zilandelayo: 0.75 kunye 1.5 ngokulandelelanayo.
Le ndlela iyanceda xa ufuna ukwenza utshintsho kwiindawo eziphakamileyo zeetekisi ezininzi eziphakamileyo.
Faka igama lomyalelo: ch
Faka ipesenti eziza kutshintsha ubude iitekisi, umzekelo: Ukuba ufaka 0.5, zonke iitekisi ziza kuncitshiswa ngesiqingatha, kwaye xa ufaka 2, zonke iitekisi ziza kukhula kabini
Khetha iitekisi ofuna ukuguqula
32. I-LISP YOKUPHILA KWENKQUBO YOKUPHATHA UMTHETHO WENKQUBO YENKQUBO YOKUPHATHA
Xa unayo ibhloko eneempawu ezininzi, kunzima kakhulu ukucima umxholo wabaninzi babo, ngokuqhelekileyo kufuneka uqakraze kabini kwisicatshulwa esikhethiweyo, ulinde ibhokisi yencoko yababini ukulayisha kwaye uqhubeke nokucima umxholo.
Ukuze ugweme lo msebenzi onzima, le nkqubo encinci iya kunciphisa ixesha elithile elilisebenzisileyo ekwenzeni umsebenzi ochazwe ngasentla. Ngalo myalelo kuya kufuneka ukhethe kuphela iimpawu ozifunayo ukususa umxholo.
Kufuneka uqinisekise ukuba iibhalo ezikulo bhokisi ziyimpawu (ngamanye amaxesha zididekile), ukwenzela ukuba isimiso sisebenze ngokuchanekileyo. Qaphela, ukuba lo myalelo oko kuphela kususa umxholo we-attribute, kodwa kungekhona impawu ngokwayo kwibhloko.
Faka igama lomyalelo: BCA
Khetha iimpawu zebhloko apho unqwenela ukucima iziqulatho zayo.
33. I-LISP NGOKUBA I-LISP ESEBENZEKILEYO IINKCUKACHA ISIGQUBO SE-TEXT AND SET IT TO ALL TITS
Abanye ixesha edlulileyo eyabiwe nawe unocwangciso ukuthi ukopishe ixabiso itekisi lwasekwa kwaye bombhalo okhethiweyo komnye, eli xesha kwesi siqhelo iya kukuvumela ukuba ufumane ixabiso okubhaliweyo okukhetiweyo, walimisa iitekisi ezininzi ukhetho.
Ukusetyenziswa kwalo myalelo mtsha kulula kakhulu, kuya kufuneka ukhethe isicatshulwa apho ufuna ukukopa khona ixabiso kwaye emva koko kufuneka ukhethe zonke iitekisi ofuna ukuzitshintsha ngeli xabiso litsha.
Faka igama lomyalelo: RTN
Khetha iteksi yomthombo wexabiso elizokopishwa
Khetha iicatshulwa eziza kutshintshwa yixabiso elitsha
Cinezela iqhosha lokungena ukugqiba umyalelo kwaye ubuye uhlaziye itekisi ngexabiso elitsha
34. I-AUTOLISP YENKQUBO OKANYE OKUQHELEKILEYO OKUQHELEKILEYO UKUHLOLA UKUBA KWIINTLOKO ZEZIKOLO
Ngu-lisp equlethe imiyalelo emibini: Ukwandisa nokunciphisa, le miyalelo ikuvumela ukuba uguqulwe ubude beetekisi ezikhethiweyo, ukwandisa okanye unciphise ngobukhulu ngokwemithetho ekhethiweyo.
Utshintsho lobungakanani lwenziwa kwinqakrazo nganye eyenziwa kwisicatshulwa kwaye lwenziwe ngokwezinto eziboniswe kwikhowudi yomthombo we-lisp, le nto i-1.2. Ukuphakama kokuqala kwesicatshulwa kwandiswe ngu 1.2 ngalinye iqhosha licofa okanye lihlukaniswe yi-1.2, kuxhomekeke kumyalelo owakhethiweyo.
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa malunga nokuphakama kwesicatshulwa ngasinye sikhalo sicacile, isiqhelo sibonisa ukuphakama okubangelwa yenguqu nganye ukuphakama okwenziwe kwitekisi kumgca womyalelo.
Lo myalelo uyakunceda xa ufuna ukunyusa okanye ukunciphisa ubunzima beetekisi ngokulinganisela, ngaphandle kokuba ube nokuphakama kokugqibela, okubonakalayo kuphela.
Faka igama lomyalelo: AU (ukwandisa) | RE (ukunciphisa)
Cofa kwisicatshulwa ukunyusa okanye ukunciphisa ubungakanani amaxesha amaninzi njengoko ubona kuyimfuneko
Cinezela iqhosha lokungena ukuvala umyalelo
35. I-LISP YOMTHETHO OTHETHA AMALUNGA EEMISEBENZI EZIKHULULEYO
Le yesiqhelo elandelayo ikuvumela ukuba afumane imilinganiselo imilinganiso (imizobo), amaxabiso ifunyenwe eboniswe kwi khusi, onokuwatshintsha ukopishe cola umzekelo, Microsoft Excel kunye ixabiso ngalinye yodwa ibe lukrozo eyahlukileyo.
Faka igama lomyalelo: DimX
Faka inani leemimiselo zeemilinganiselo ezifunyenweyo (3 ngokungafaniyo)
Khetha ubukhulu ukufumana imilinganiselo yakho
Cindezela u-Enter ukugqiba ukhetho kwaye ubonise iimpawu ezifumanekileyo kwisikrini
36. IINDLELA ZOKUVELA KWEENKQUBO EZIPHUMA UKUBALULEKILEYO KWAMABANDLA OKUFANELEKILEYO
I-Routine kwi-VisualLisp ikuvumela ukuba ukwandise inani leenombolo zezicatshulwa ezikhethiweyo. Le nkqubo eveliswe kwiVisualLisp ivumela ukuba kwandiswe inani leenombolo zezicatshulwa ezikhethiweyo (enye ngenye) ngokubhekiselele kwenyusa inkalo.
Ukuba inani elibonisiweyo liyinombolo embi, ixabiso elilandelayo liza kuhla kwexabiso lokuqala.
Umzekelo, ukuba ixabiso lokuqala lelona 1, kunye ixabiso isongezo sika unit 1 kungene, amanani ezilandelayo ekhethiweyo iya bendinokunyusa nge- iqela elinye, ezi zinto zilandelayo ziya 2, le 3 olandelayo, njalo njalo
Faka igama lomyalelo: inc
Khetha umbhalo kunye nexabiso lokuqala
Khetha zonke iitekisi ofuna ukuzenza endaweni enye
Lisp forpography kunye ne-3D
37. Ukuguqula iinkampani ze-3DFace kwi-ACIS solids
Abanye kwexesha eyadlulayo ndabona lo Teketa umdla routine kwaye nangona esandula awuyisebenzisanga mna, xa kwakufuneka iye yandinceda kakhulu kunye izibalo volume, olu shicilelo kwi amathuba avelayo 3D civil ayiniki iziphumo I Kufuneka mna .
Yinto eqhelekileyo apho ukhetha izinto ze-3Dface, uziqhelanisa kwaye uzibandakanye ngokuziguqula into eyodwa ye-3D eqinile, ukusetyenziswa kwayo kulula kwaye kwanele ukhethe izinto kunye nomsebenzi uya kwenza wonke umsebenzi.
Ukuxabisa ngakumbi ukutshintshwa okwenziwa ngumsebenzi kwizinto, kufuneka ube nombono we-3D, Ngenye indlela, kwindlela yokujonga isityalo, iindawo eziphakamileyo ezidalwe kwi-3D Solid aziyi kubonwa, kuba okuqinileyo kwenziwa ngokuveza ubuso obukhethiweyo ngokuthe nkqo “phantsi” umgca ongu-z wangoku, kwinqwelo kunye nomgama ochazwe ngumsebenzisi.
Ukuqinisekisa ukuba zonke iinxalenye zengxowa ziveliswa njengezinto ezinamandla, Lo mgama awukwazi ukuba yinto, kodwa isisombululo sinokunqunyulwa kamva xa kunesidingo kwi-thickness efunekayo, kunye nemisebenzi ye-Boolean okanye imisebenzi yokulungisa izinto. Isiqili esiphumelayo senziwe kwinqanaba langoku.
Ukuba ekupheleni komanyano wezilwanyana ezincinci, umsebenzi uyayeka okanye uxhoma ngenxa yemingcele yememori, ungazama ukuzibandakanya ngesandla.
Ukuba ubuso obusondeleyo abukho izilungelelaniso ezifanayo, kuya kubakho iincinci ezincinci okanye ukugqithisa phakathi kwezinto ezinamandla ezithathwe kuwo, okungenzeka ukuba i-AutoCAD ingenako ukujoyina i-solids, ibonisa imilayezo elandelayo:
"Ukungahambelani kwegophe lendlela yokuhlangana."
"Ulwazi olungahambelaniyo kwi-vertex kunye nolungelelwaniso lwe-coedge."
"Ubudlelwane obungahambelaniyo bobuso."
"Ubudlelwane obungahambelaniyo bobuso nomzimba."
Ukuba iingxaki ziyaqhubeka ekuveleni okuqinileyo, kufuneka ukopishe umgama omncinane uze udibanise iikopi kunye neyokuqala ukuzama ukuzalisa zonke izikhala kwi-3DFace kwaye uzame kwakhona de ingxaki ixazululwe.
Faka igama lomyalelo: F2S
Khetha ubuso be-3D ukuze ube yomelele
Faka ukuphakama (phantsi) okuqinisekileyo kuya kubakho kwi-vertex nganye ye-3DF
Faka indlela yokuvelisa iqinileyo: I-Automatic okanye i-Manual
38. Ufaka ubungakanani kumigqa yokujikeleza ukusuka ekuphakameni kwawo
Ngezihlandlo eziliqela uzakufumanisa ukuba unamanqanaba omgangatho kwifayili, kodwa aba abanalo nqanaba, basebenzisa le ndlela, unokufaka ubungakanani kumgca wendlela yezobugcisa oyifunayo.
Ubungakanani obuya kufakwa bubangqina kunye neempawu, ezi bhloko zidalwa kumzobo millimeters. Ukuze ukwazi ukusebenzisa olu lisp ngaphandle kweengxaki, kufuneka usebenzise umyalelo "UNITS” (Iiyunithi) zichaza iiyunithi zomxholo ekufuneka zifakwe kwi “Millimeters” (iimilimitha).
Kufanelekile ukucacisa ukuba kule ndlela yokufaka ukuphakama okuchanekileyo kwimigca ye-contour, kufuneka babe nokuphakama (ukulungelelanisa z> 0), kuba ukuphakama kufunyenwe ukusuka kwindawo eboniswe kwigophe lomjikelo Ukuba imigca ye-contour inokuphakama 0 (ulungelelwaniso z = 0), oko kukuthi, abanakho ukuphakama, indlela yesiqhelo iya kufaka isicatshulwa ngelo xabiso.
Isikali olucelwe imisebenzi yesiqhelo libhekisela isikali eziya icebo umzobo, i ixabiso benchmark itekisi ubungakanani ledayimenshini elizakufakwa, ungenza avavanywe ngokwandisa okanye ukunciphisa eli xabiso de nenkalo sifakwe nge ubungakanani umbhalo ofuna.
Esi siqhelo sineziqhotyoshelwano ze-2: EL_TAG.dwg y EL_TAG2.dwg, iibhloko kunye neempawu ezichazwe ngasentla, ezi fayile ziyakopizwa naphi na, nangona kukhuthazwa ukuba zibe kwifolda efanayo kunye nesiqhelo.
Ukuze i-AutoCAD ilayishe ezi fayile, kufuneka uchaze indlela yendawo yale bhokisi yencoko Khetha-> Inkxaso yeefayile zendlela yokukhangela.
Faka igama lomyalelo: CPE
Bonisa ingongoma engentla komgca womgca wendlela kunye nalapho ufuna ukuba ubukhulu bungeniswe khona
Ubonisa enye ingongoma ukuchaza ukujikeleza okuya kufakwa kwimiba yokufaka
Ungaqhubeka nokufaka ubungakanani obuninzi kubonisa indawo yakho yokufaka, ukuba awufuni ukufaka ubungakanani obuninzi, cinezela iqhosha lokungena ukugqiba umyalelo
39. Dweba imigca yokunquma okanye ukuzaliswa kwethambeka
Le ndlela idonsa umgca we-cut or fillings, le mizila ye-slope iyimfuneko ukubonisa okanye ukumela ukungalingani phakathi kwamaqonga.
Ukuze kuveliswe umgca we-slope kunye nale nkqubo, i-6 kufuneka ifake idatha eya kuvumela umgca we-slope ukuba uveliswe ngokulindelekileyo.
Apha sichaza idatha eceliwe:
Umgama phakathi kwemigca ye-slope (m): Nakhu kufuneka ungene ukuhlukana okuya kubakho phakathi komgca ngamnye womnatha.
Khetha i-polyline yezinga eliphezulu: Njengoko umthamo ungumdahluko phakathi kwemigca emibini yemingcele, apha kufuneka iboniswe ukuba umgca unqanaba eliphezulu.
Khetha i-polyline yomda ophantsi: Ngokufanayo kuyimfuneko ukubonisa i-polyline yezinga eliphantsi.
Sika okanye ugcwalise?: Isalathiso somzobo wesiqalo semigca yemithambeka iya kuxhomekeka ekubeni kukunqunyulwa okanye ukuzaliswa, ngokungagqibekanga xa ucinezela ukhiye we-Enter, uya kuthathwa njengexabiso lokuzalisa "R".
Ubude obude bomgca we-slope: Umlinganiselo oza kuba nomgca omkhulu kunawo wonke omelela umthamo, ukuba umlinganiselo ungaphantsi komgama ukuya emanzini entlambo, kuya kuphawulwa ukuba umgca awuhambelani kunye nomgca wecala lomnatha, ukuba unqwenela ukuba Umgca omkhulu kumanqabana afikelele kumda we-edge line, ufanele ubonise inani eliphezulu, njenge-200 okanye i-500 umzekelo.
Umgama phakathi kwamagqabha: Ukwahlukana okuya kuba neendlela zokuhamba.
Uyakwazi ukubona iirafu ezilandelayo ukuqonda okungcono iinkcazelo:
Nanku ubude obude kumgama we-slope we-5m ubonisiwe.
Lapha siye sabonisa ubude obude kumgama we-slope we-200m (ubunani obubalulekileyo abubalulekanga, luyinto nje exaggerated value ukwenzela ukuba xa unqamle umgca wecala lomnatha, unqunyulwa ngokuzenzekelayo).
Kufuneka ube njengangoku umaleko ozakuqulatha imigca yemithambeka eza kuveliswa, umzekelo: “Imigca yokuloba".
Faka igama lomyalelo: Tic
Faka idatha eceliwe ngumyalelo.
40. Dweba umgca nge-slope eboniswe
Le ndlela ivumela ukuba udwebe umgca kunye nomthambeka obonayo, ukwanele ukubonisa indawo yokufaka umgca kunye nomthamo oza kuba nawo.
Ithambeka kuboniswa ixabiso kuthelekiswa 1, umzekelo, ukuba ufuna ukuzoba umgca nge ojonge 2: 1, kodwa kufuneka abonise njengoko ithambeka ukuba kude kufikwe kumgca manani 2, ukuba ithambeka ukuba ifunyenwe 1: 1.333, kufuneka ufake 0.75.
Ukucaciswa okunye, ukuba ufuna ukufumana i-slopes ngexabiso le-1 yokuqala (1: x), kufuneka ulwahlule inombolo 1 phakathi kwe-slope (x).
Faka igama lomyalelo: DT
Ibonisa inqaku lokufaka umgca
Faka umthamo oza kuba nomgca njengoko uchazwe ngasentla
41. Dweba umgca nge-slope ebonisiweyo
Ngalo mkhuba olula unokwenza umgca kunye nomthambeko owubonisayo, kuba oku kunokwaneleyo ukubonisa inqaku lokufaka umgca kunye nentlambo iya kuba nayo.
Umgca uveliswe ngobude obude beeyunithi ze-10 kunye nobude obude bexabiso lentlambo eliboniswe phakathi kwe-10.
Faka igama lomyalelo: LP
Faka umthamo oza kuba nomgca kwipesenteji (ejm: 12), ngaphandle kwepaji yepesenti
42. Bala iinqununu kwaye uzalise iindawo zamanqamlezo
Ngalolu hlobo lwenkqubo ungayifumana i-cut and filling areas from section cross, ene-Line Terrain kunye nomgca othe ngqo (kwicandelo lokugqibela).
Ukuze lolu luhlu lufumane indawo, i-polyline yomhlaba kunye nebakala kufuneka kukhethwe kwaye umyalelo uya kucela ingongoma yokufaka imixholo yemimandla ehambelana nayo.
Faka igama lomyalelo: AMAZIKO
Khetha i-polyline yendlela yokuqala (Indawo yendalo)
Khetha i-polyline yendlela (iBakala okanye i-Subgrade)
Bonisa inkcazo yokufaka iitekisi zeendawo ezifunyenweyo
Ifayile ifayile ye-CAD ifakiwe kwifayile ye-rar.
43. Faka ifumaneka kwiprofayili ende
Lo mgaqo uvumela ukuba ufakele kwiitars kwimithambeka yenkcazo yexesha elide (ipolline okanye umgca), kuba kunele ukhethe iphrofayili (i-polyline) kwaye ubonise indawo ehambelana nendawo ebonakalayo yeetekisi ezibonisa imithambeka.
Ukuba umyalelo umgca ubala kuphela iingongoma isiphelo, ukufumana ngaloo ndlela ithambeka, kwimeko kwi lombuzo Somzobo onamacala amaninzi, le yesiqhelo ufumana ngamnye enekona lokuqala nelokugqibela kwaye ubala ukungavumelani kubandakanywa onke amacandelo ye polyline.
Umbhalo obonisa ithambeka elifunyenweyo lolo hlobo, umzekelo: “P = 1.11% kwi-10.49 m” kwaye njengoko nisazi, le fomati inokulungiswa ukuze ihambelane nendlela ngamnye wenu asebenza ngayo.
Njengoko kwimeko yangaphambili, Isitayela sokubhaliweyo sangoku akufanele sicinge ubude, ukuba unayo, kukho impazamo kwaye izithambeka aziyi kufakwa.
Isilinganisi esiboniswe ekuqaleni kwenkqubo yimiba yecandelo kuphela kwaye ayikhompembelelo kwimilinganiselo efunyenweyo yokucwangcisa imithambeka.
Faka igama lomyalelo: PNF
Faka isangqa kwizicatshulwa zeentlambo ezifumanekayo eziza kufakwa
Khetha iphrofayili ukubala iintlaba
ibonisa indawo yokubhekisela ekufakeni izicatshulwa kwiimithambeka
44. Faka uphawu kumacandelo e-polyline
Esi sihlandlo esilungeleyo siyi-adaptation yangaphambili kwaye ikuvumela ukuba ufake ifayile kuyo yonke iindlwana ze-polyline oyikhethayo, oko kufuneka ukhethe kuphela.
Uphawu lokufakela luyifayili yokudweba (ibhloko) eveliswe kwinqanaba elithile, kodwa lilungelelaniswa ngokugcwele, linokulungiswa njengalo naluphi na umzobo, kuphela indawo yendawo ekufuneka ihlonishwe kuyo (kweli liko lendawo yesangqa kwibloko). ).
Kwikhowudi yomthombo wefayili ongayikhetha ukufaka isangqa esikhundleni sebhloko, kuba kufuneka ususe kuphela amazwana avela kumgca onale khowudi kwaye ubeke izimvo kumgca ofaka ibhloko.
Faka igama lomyalelo: IMA
Khetha i-polyline ofuna ukuyibeka kuyo
Ibonisa indlela kunye negama lefayile ekufuneka ithunyelwe ngayo
45. Fumana umthamo wendlela ekhethiweyo
Le nkqubo iqhutywe kwi-AutoLisp, ivumela ukufumana ixabiso lentambo yomgca okhethiweyo.
Kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba lo myalelo usebenza kuphela kunye nemigca, ukuba unayo i-polyline kufuneka uqhube okanye uvelise umgca phezulu kwe-polyline.
Faka igama lomyalelo: TL
Khetha umgca ofuna ukufumana umthamo.
Ulwazi olufunyenwe yi-slope H: V.
46. UKUQALA KWAMASEBENZI E-3 AMALUNGA OKHUSELEKILEYO - ICANDELO 3: UKUSUKA KWENKQUBO ESEKHAYA KWE-WALL
Ngalesi siqhelo unako ukuvelisa iphrofayli (ukuphakama) kwodonga olugcinayo, le phrofayili inokwenziwa kwidatha yezicwangciso zomgca weedonga, ezi nkcukacha zilandelayo: Ukuqhubela phambili, Ukuphakama kweNdlela kunye neCota de Cimentación.
Idatha yesilinganiselo eceliwe ngumyalelo, akabhekiseli kwisilinganisi esicacileyo seprofayili (iphrofayili yenziwa ngezinga elilingana nelinganayo) kodwa kubungakanani bezinga leetekisi zeprofayili (ubukhulu kunye nedatha).
Ukwenza iphrofayli, kwanele ukuba kuqala ukhethe ukuqhubela phambili kwecandelo, ngoko ukuphakama kwesithsaba kwaye ekugqibeleni ukuphakama kwesiseko sesiseko.
Kufuneka unakekele ngokukhethekileyo ekukhetheni kwedatha kuba ukuba awukhethi isicatshulwa kwaye ucofe kwiscreen, umthetho uya kuyithatha njengokugqibezela ukhetho lwedatha ukwenza iprofayili.
Ifayili ye-CAD inikezelwa ngumsebenzi, kunye namacandelo omnqamlezo eludongeni, njengomzekelo wokubeka indlela ye-lisp ekusebenzeni.
Faka igama lomyalelo: MUP
Faka isixa (ubukhulu) beetekisi zeprofayili (umzekelo: 75)
Khetha isicatshulwa somlinganiselo wesithsaba
Khetha umbhalo ophantsi kwesiseko
Xa usugqibile ukhetho kuzo zonke iindonga zodonga, cinezela faka kwaye ibonisa iphuzu apho inxalenye engaphezulu ekhohlo yesithsaba seprojekthi yodonga iya kwenziwa.
47. UKUQALA KWEZINDAWO ZE3 ZEZINDABA ZOKUXHUMANA - ICANDELO 2: UKUQHUBA (UKWENZISWA) KWESIGABA SOMGADI
Esi siqhelo sikuvumela ukuba ubude (ububanzi) isigaba sodonga esakhiwe kwindlela yokushicilelwa ngaphambili (kuba inemilinganiselo efanayo yoyilo), umphumo uza kufana nomfanekiso olandelayo (umlinganiselo uhluka ngobunzima bomdonga).
Lo mgaqo ucela ireyithi yee quotas eziza kwenziwa, eli nqanaba libhekisela ekuhlukaneni phakathi kwemigca yemida, ubukhulu kunye nomlo womda kuxhomekeke kuphela kwisimbo samanani kwaye oku kufuneka kube yenziwe ngaphambili ngumsebenzisi kwinqanaba elisebenza kuyo.
Ukuvelisa imida, qhubela phambili kwindlela yokuqala yokuvelisa udonga, bonisa inkcazo kwiphepha lebakala kwendlela, ecaleni apho udonga lufuneka khona kwaye ubonise ubude ngokusebenzisa ukhetho lokubonisa ingongoma ephantsi kwesiseko sodonga.
Kufanelekile ukukhankanya ukuba lo mgaqo ubeka umda kuphela kwicandelo lodonga oluveliswe kunye nomsebenzi wesithuba sangaphambilinjengoko isebenzisa iindlela zokuzoba ezifanayo njengecandelo lodonga, unako ukuguqula kwi khowudi imisebenzi ebala amanqaku xa ufuna ukufaka isicelo solu hlobo lwedonga.
Faka igama lomyalelo: MUD
Faka isalathisi sokuhlula phakathi kwemigca yemida
Ubonisa indawo yokubhekisa (I-P1 yomfanekiso) eludongeni
Ubonisa ulwalathiso lwodonga (Ekhohlo okanye Ekunene)
Ubonisa iphuzu eliphantsi kwesiseko secandelo lesodonga (I-P2 yomfanekiso)
48. UKUQALA KWAMASEBENZI E-3 KWIINTLOKO ZOKUXHUMANA - ICANDELO 1: UKUBHALA KWESIGABA SOMGADI
Le ndlela yinto yokuqala ye-3 evumela ukuvelisa izindonga zohlobo lokuvumba, kwithuba elidlulileyo sathi sabelana nawe ngokwesiqhelo esakha udonga olugcinayo, ngeli xesha ixesha eliqhelekileyo lenza udonga ngokuqulunqwa kobugcisa (imilinganiselo).
Kukhunjulwa ukuba imisebenzi yobugcisa bendlela (izindonga, ukuthungqwa komhlaba, njl njl), akusoloko ilungelelaniswa nomsebenzi ngamnye, olu luyilo luyimisebenzi yamanqaku amaninzi kuloo ndawo ayakha ngayo.
Le ndlela ikuvumela ukuba uvelise udonga olugcinayo kunye neendlela ezilandelayo zoyilo:
Ukuyivelisa, bonisa i-shoulder shoulder kwecandelo lendlela, ecaleni apho udonga lufuneka khona, Nge-lisp unokwenza udonga nakweliphi na icala, kuba kufuneka ubonise umkhombandlela (ngakwesobunxele okanye ngakwesokudla).
Ngokubhekiselele kumphakamo, oku kuchazwe yi-2, Iyokuqala yindawo ephakamileyo echaziweyo (H) kunye nokhetho lwesibini ukuluchaza ngezinga lezantsi kwesiseko soodonga, eli nqanaba lingabonakaliswa yicatshulwa kwisikrini, inkqubo inoxanduva lokubala ukuphakama kunye nazo zonke ezinye iindlela.
Le nkqubo ikulungele ukucinga iindlela ezimbini zokuphakama kwodonga: Umlinganiselo wokuqala ngowodonga oluphakamileyo, apho isiseko sesiseko asinasigxina kwaye I-criterion yesibini (esetyenziswa kakhulu) kukuba ukuphakama kwodonga kuyahluka, apho isiseko sesiseko siphezulu kwaye asihambelani nemithambeka yendlela.
Indlela yokusebenzisa le lisp iya kuxhomekeka kumsebenzisi ngalunye, kwaye le nto yinto efanelekileyo kakhulu iya kuba ngowokuqala unako ukuvelisa izicwangciso zodonga ngaphandle koncedo lwaluphi na uhlobo, ngale ndlela kuya kuba lula ukuqonda ukusetyenziswa okufanelekileyo kwalolu hlelo.
Faka igama lomyalelo: MUS
Ubonisa iphuzu epaleni kwibakala kwicala elibonisiweyo
Khetha indlela oya kuchaza ngayo ubude bodonga (ngokuphakama okanye isiseko sezinga)
49. UKUSETSHENZISWA KWE-AUTOLISP UKUVULA I-WALL OF CONTAINMENT
Isiqhelo esilungeleyo sivumela ukudweba udonga olugcinayo lohlobo lokudakalisa kweendlela, imilinganiselo apho udonga oludityaniswa kulo mdlalo luhlala lufana (luhlala luhlala njalo), umlinganiselo owodwa oguqula ubude bodonga.
Amaphuzu apho udonga oluveliswayo luvela kwimilinganiselo yodweliso oluthile lwedonga, ukuba ufuna ukuba nale ndonga zedal ziveliswe kunye nemilinganiselo yesiko, kufuneka utshintshe imilinganiselo ebhaliweyo ngaphakathi kwenkqubo .
Emva koko unokubona igrafu elandelayo, equlethwe ngamanqaku apho udonga lwenziwa khona:
Faka igama lomyalelo: MU
Ubonisa indawo yokuqala yesidonga sodonga
Faka ukuphakama kodonga
50. I-LISP YOKUPHATHISWA KWENKQUBO YOKUBHALISA UKUPHATHWA KWE-ALIGNMENT
Esi sihlandlo esiluncedo sifike ezandleni zam ngexesha elidlulileyo kwaye kulabo bantu banqwenela ukuvelisa ukulungelelana okulula ngaphandle kwemfuno elandelayo yokuvelisa izigaba eziphambene namanqaku okanye iiprofayili zangexesha elide, unokusebenzisa ngokunjalo le nkqubo.
Isiqhelo sinobumba bhokisi yencoko yababini ekuvumela ukuba wenze ngokwezifiso ifomati yokugqibela yeenkqubela phambili efakwe kwi-axis.
Ukusebenzisa isiqhelo kufuneka ube ne-polyline (ulungelelaniso) kwaye landele amanyathelo alandelayo:
Khuphela iifayile ze-3 ezikhutshwe kwi zendlela zokuxhasa yakho ye-AutoCAD
Ukulayisha ifayile ufunde kwi-AutoCAD (cona APPLOAD).
Faka igama lomyalelo: qhubela phambili
Kwibhokisi yencoko yababini, cacisa ifomathi eziza kuvelisa ziya kuba nazo.
Khetha i-polyline (ukulungelelaniswa) apho ezi zinto ziya kuveliswa.
Ubonisa iphuzu, eliza kuba yindawo yokuqala yesizukulwana seenkqubela phambili.
51. INDLELA YOKUBHALISA INKQUBO YENKQUBO YOKUPHILA KWAMAPHOLI NAMAPOLYLINES
Le ngenye yeendlela ezigqityiweyo ukudala ifomati yefayile yexesha elide. Ngokukhetha nje ii-polyline ze-2D (indawo kunye nebakala), isiqhelo senza ifomati yefayile kunye nayo yonke idatha efuna ukuboniswa.
Ukuze isizukulwana sale phrofayili siphumelele, iipollines ezikhethiweyo mazibe kude kunokwenzeka kwi-2D, ngaphandle koko iphutha ekusebenzeni kwayo lenzeke.
Ukusebenzisa le nkqubo kufuneka wenze oku kulandelayo:
Khuphela iiFayili ezikhutshiwe ze-3 kwenye yeendlela zokuxhasa ze-AutoCAD yakho
Ukulayisha ifayile: profile.fas Kwi-AutoCAD (nge-APPLOAD).
Faka igama lomyalelo: iprofayili
Kwibhokisi yencoko yababini ebonisiweyo, cofa ku “Iinkcukacha” kwaye ucofe amaqhosha “Umhlaba"Kwaye"Ukutshiza” ukukhetha umhlaba kunye neepolylines zebakala
Ukuba ufuna ufuna ukuchaza enye idatha kwibhokisi yencoko phambi kokudala iphrofayli (ukhetho)
Bonisa i iphulo lokufaka phezulu ngakwesobunxele kwiprofayili ukuvelisa
52. INDLELA YOKUPHILA KWENKQUBO YOKUPHAKATHI KWENKQUBO YOKWENZA I-ARCOS IINGXELO ZOKUPHATHA
Le ndlela ikuvumela ukuba ungeze imida yee-arcs zomzobo okanye ezo kuphela ozikhethayo, ekuboniseni iziphumo zesamba kumgca womyalelo.
Faka igama lomyalelo: sumarco
Khetha i-arcs yomzobo ofuna ukuyongeza, ukuba ufuna ukukhetha zonke i-arcs, cofa iqhosha faka kwisicelo sokukhethwa kwamaphetha.
53. I-LISP YOKUPHILA KWENKQUBO YOKUBALULEKILEYO I-UCSS IVOLWA KWAMANYE AMAFILE
Isiqhelo esithakazelisayo esidalwe nge-AutoLisp kunye neZiboniso eziPhambili zeZicelo (vba), vumela ukungenisa iUCS igcinwe negama kunaliphi ifayile yesibini kumzobo wethu.
Esi sixhobo sinceda gqitha ukuba usebenza nezicwangciso apho u-UCS ezininzi zilawulwa khona, sidla ukudala i-UCS kwifayile yokuqala kwaye kufuneka senze okufanayo kwezinye iifayile, ngale ndlela, Kwanele ukudala kuphela kwindawo yokuqala kwaye sinokungenisa kuwo nayiphi na ifayile.
Isiqhelo siziphatha ngokufanayo kwisixhobo se-Designcenter, ngaphandle kokuba akanalo ukhetho lokungenisa i-UCS kwezinye iifayile. Kwimeko yolu hlobo nangona ingavumeli ukudonsa kunye nokuwa, iziphumo zilindeleke.
Layisha okanye wongeze iifayile ze-DVB kunye ne-LSP kwi-Appload Startup Suite.
Faka igama lomyalelo: UKUFUNA
Kwindawo Umdwebo woMthombo, nqakraza kwiqhosha khetha, ukukhetha ifayile yokudweba ofuna ukuyifaka kwi-UCS.
Kwindawo UCSs Ifunyenwe, khetha u-UCS ukuba ungenise kwaye uqhosha kwiqhosha lase-OK.
54. UKUQHUTYWA KWE-LISP OKUSUSULA ISIQINISEKISO SOMGANGATHO WOMGANGATHO
Kwenzekile kuwe ukuba nge-AutoCAD une polyline kwaye ufuna ukuphelisa enye yeemeko zayo kwaye ukwazi ukuwufezekisa kufuneka usebenzise imithetho engaphezu kwembini.
Ngale ndlela uya kufuneka kuphela ukuba ubonise ukuba yiyiphi i-vertex yomhlaba ofuna ukuyichitha kwaye ulungiselele ishishini.
Ukuze isimiso sisebenze ngokuchanekileyo, xa sibonisa iphuzu, Oku kufuneka kube malunga ne-vertex ukuba ichithwe kwaye ingabi yindawo ekufutshane nayo, kuba kufuneka usebenze iimodesti zokubakho kwiinkampani, ezifana nePoppoint okanye Intersection.
Faka igama lomyalelo: evepol
Khetha i-polyline apho ufuna ukususa i-vertex.
Bonisa i-vertex ye-polline enqwenela ukuyichitha.
55. IINDLELA EZIPHUMA IINKCUKACHA ZAMAZIKO ABAZIINTLOKO ZEZINJONGO 3DFACE
Lo mgaqo obhaliweyo kwi-Autolisp, ufana neyokudlulileyo, umzekelo kukuba ngeli xesha, liyakhupha izilungiso zee-3Dface izinto ze-AutoCAD, ezi ngqungquthela zigcinwe kwifayile ye-CSV ye-Microsoft Excel, eboniswe kuyo .
Ukuthunyelwa kweengongoma zeetente Unokukunceda kakhulu xa unesigxathu se-3D ubuso kwaye ufuna ukufumana izilungelelaniso zabo ukuphinda uphinde ufake idilesi yakho yendawo yokudibanisa.
I ngqalelo kwakhona zifana neyokuqala, kwimeko apho kukho i-3Dface edibeneyo nemigangatho efanayo, kwakhona ukuba ufuna, kufuneka uqwalasele ukhetho ulandelelanise ukulungelelanisa nokuphelisa ezo ziphindiwe.
Ukulungelelaniswa kwamanye amazwe anakho Ifom ye-P, N, E, C (i-Point, North = Y, East = X, Ukuphakama = Z) kwaye njengoko ithunyelwa kwifayili ye-CSV (ihlukaniswe ngama-commas), xa uvula ifayile nganye ixabiso liza kuthatha iseli layo elizimeleyo ngendlela ehlelekile.
Faka igama lomyalelo: E3D
Khetha izinto ze-3D Face apho ufuna ukuthumela khona izilungiso zazo.
56. I-LISP I-LISP NGOKUBA KWI-COPY AMABHUNGA OMTHETHO OYINGAPHAKATHI NOMA UKUFUMANA
Ngamanye amaxesha ufuna ukukhuphela ezikhoyo, kodwa xa ezi ngaphakathi block, senza ntoni ngokuqhelekileyo ukusebenzisa ukuba ibhloko okanye mhlawumbi ukusebenzisa umhleli block, ukuze ubenakho ukuthatha olawula amaziko ngabanye, khetha uze ukope .
Ngalo mgaqo akayi kusadingeka ukuba asebenzise nayiphi na ibhloko okanye sebenzisa umhleli webhloko ukukopisha naliphi na iziko elingaphakathi kuyo, kuya kukwanela ukulayisha le ndlela kwaye ukhethe amaziko ukuba akopishe.
Izinto ezintsha ezidalwe ukusuka kukhetho kubonakala ngaphezulu kweyayimvelaphi, njalo ukuba ufuna kufuneka ukhethe kwaye ubathumele kwindawo efunwayo.
Kule ndlela ungakhetha ukhetho lwalo ukuba izinto ezintsha zingadalwa kwenye indawo, ekhethiweyo kuba ngokungagqibekanga amashishini amatsha adalwe kwinqanaba langoku.
Faka igama lomyalelo: CPL
Khetha izixhobo zebhloko ofuna ukuyikopisha.
Ukuba unqwenela, ungakhetha ukutshintsha umgca apho izinto ezintsha ziveliswa khona.
57. I-LISP YOKUPHATHISWA KWENKQUBO YOKUPHUTSHISA I-ARCOS YE-POLYLINEINE KWIINTLOKO ZEZILIMI
Le ndlela ikuvumela ukuba utshintshe iifayile ezifakwe kwi-polyline ibe ngamacandelo ahlukeneyo, ubude becandelo ngalinye liya kuba nguwe ochazayo kwiinketho zomyalelo. I-lisp ithatha idatha yee-vertic ze-polyline ekhethiweyo, kuquka i-geometry ye-arc kwaye ivelise i-polyline entsha kunye nedatha entsha.
Ubude becandelo ngalinye elitsha kwi-arc kuxhomekeke kwixabiso elifakiwe, oku kufuneka kube ngaphantsi kobude be-arc encinci ye-polyline ekhethiweyo, I-lisp iyakwahlula i-arc yoqobo ibe ngamacandelo "n". de ukufikelela ubude bayo bokuqala.
Ngo kukhetha unokukhetha ukugcina i-polyline yasekuqaleni, -iyo eya kwenza ukuba i-polyline yenziwe ngaphezulu kwayo-okanye iyakususa.
Le nkqubo ingaba luncedo, umzekelo, kwimeko apho kufuneka uchaze amaphuzu ecaleni kwinqanaba kwi-axis ye-alignmental or vertical alignment.
Faka igama lomyalelo: artose
Khetha i-polyline apho ufuna ukuguqula amacandelo aphilileyo kwiinqununu ezifanelekileyo.
Ibonisa ubude becandelo ngalinye eliya kwenza umgca omtsha othi “arc”.
Khetha into oyenzayo kunye nekhetho lokuqala, elikhethiweyo, ukuba ukhetha ukuphelisa, uya kuba ne-polyline kuphela kunye namacandelwana aqingqiweyo aguqulwe abe ngamacandelo ahlukeneyo.
58. I-AUTOLISP YOKUPHATHWA KWEENKQUBO EZIFUNDA AMALUNGA EZIQHELEKILEYO KWI-AXIS
Ngalo mgaqo ungafaka iingongoma ngemida yazo eya kwi-axis ekhethiweyo (i-polyline), idatha yokufaka kwezi ngongoma ivela kwimigaqo yokuhamba yemida okanye ukufundwa kwefayili ekude (ifayile ye umzekelo wokuqonda okungcono).
Le ndlela ingasetyenziselwa umzekelo kwimeko yesikalo seendlela, ngamanye amaxesha kufuneka ubeke phambili ngokuqhubekayo kwi-axis (i-polyline), efana nenkqubela phambili 23.76Ngesandla kungenziwa kodwa kuthatha ixesha elide, kwesi siqhelo nje ngokwaneleyo ukukhetha i-axis, ebonisa ukuba axis oluqhubekayo lokuqala (ngokuqhelekileyo ixabiso 0), uze ufake ibanga.
Ukuba unemizila emininzi ukungena kwi-axis, endaweni yokuthayibha i-lisp inikeza ukhetho lokukhetha ifayile yombhalo, ngaphakathi kwefayili yombhalo kuya kuba yimida kwaye i-lisp iya kubafunda enye enye, ibangenise ngongoma kwi-axis (polyline).
I-lisp Kwakhona kuvumela ukutshintsha ukuqala kwe-axis Ekubeni isiqalo sinqunywe ngokwendawo yokuqala eyenza i-polyline, ukuba i-lisp iqala ukubeka imigama ngenqanaba lokugqibela elingeyiyo oyifunayo, sebenzisa ukhetho: "Tshintsha i-axis ekuqaleni".
Ngokuhambisana neendlela, iifayile ze-CAD zinikezelwa, kunye ne-axis eyodwa (polyline), njengomzekelo wokuphumeza isimiso se-lisp.
Faka igama lomyalelo: PP
Khetha indlela ofuna ukufaka ngayo i progressives: ngesandla (1 × 1) okanye ngokufunda ifayile yombhalo.
Khetha i-polyline ye-axis
Faka umgama ohamba phambili okanye wokuqala kwi-axis (ngokusilelayo yi-0)
Faka inkqubela okanye umgama ukufumana (kwimeko yencwadana, ukuba ukhetha ukufunda ifayile oku akuyimfuneko)
59. I-LISP YOKUPHATHISWA KWEENKQUBO EZIFUNDA ABAKHULU KWI-NKCUKACHA NGOKWENZISELWA KWE-SPECIFED SPACIFING
Ngale ndlela yenziwe nge-AutoLisp kunye neVisualLisp, uya kuba nakho ukufaka zonke iimitha "n" umphakamo wepolyline ekhethiweyo (indawo yendalo okanye idlelo) kwifomathi yakho yeprofayile, imiphakamo iya kufakwa ithatha njengereferensi inqaku elibonisiweyo ifomathi.
Kulo myalelo unokuchaza intsingiselo yomzoboEsi sikali alibhekiseli kwisikali nkqo ye ifayile, kodwa kwisikali izicatshulwa ngokwendlela le imilinganiso elizakufakwa, okubhaliweyo zicingisise kwisikali 1: 500 ibe inkulu ngaphezu kwisikali 1: 50.
Kwakhona unokukwazi ukuchaza isilinganisi esicacileyo seprofayili yakhoLe ngcaciso ibaluleke kuba olawula amaxabiso idayimenshini kwindawo yabucala imigodi yendalo kuthotha 10 amaxesha ubungakanani yayo nkqo ukuba amaxabiso nenkalo ubukhulu zaso 10 amaxesha, ngoko ke umyalelo kumele ukwenza imisebenzi ehambelana ukutshintsha zentsulungeko ineenkalo eyiyo.
Olunye uxabiso lokungena kunye lowo uchaza lo myalelo, ngumgama apho ubukhulu buza kufakwa khona, ixabiso elingagqibekanga le nkqubo ezisa i-10, oku kuthetha ukuba ubukhulu buza kufakwa onke amamitha e-10 kwindawo engqamlekileyo ukusuka kwindawo echazwe kuyo.
Emva kokukhetha i-polyline emele iphrofayili yakho (TN, Rasante, njl), umyalelo uya kukucela ukuba ubonise indawo yokubhaliweyo kwifom yefayile yakho, le ngongoma kufuneka ubonise kuyo yonke inkqubelaUmzekelo ukuba inkangeleko ukuze 0 000 100 + + 000, kufuneka abonise ndawana 0 okuqhubekayo okanye 10 okanye 20, njl (ngokwe nganye njengoko kubonisiwe umgama yokufaka zobukhulu).
Recuerda que ukwenzela ukuba le nkqubo izuze imilinganiselo ehambelanayo, iprofile kufuneka ibekwe ngokuchanekileyo, oko kukuthi imilinganiselo ichanekileyo kwiprofayili.
Lo mzobo uzakukunceda uqonde ngakumbi iinketho zolu hlobo:
Ukusebenzisa le nkqubo kufuneka wenze oku okulandelayo: (Iimpawu ezingaguqukiyo kufuneka zilandele umzekelo ngefayile yeCAD iqhotyoshelweyo)
Faka igama lomyalelo: ICP.
Faka isilinganisi sokudweba ngobukhulu bobunzima: 850 (Unako ukuqhubeka utshintshile kude kube ubukhulu bukhulu)
Faka ubungakanani bomlinganiselo weprofayile: 1 (isilinganisi esilingana nesilinganiselo)
Faka umgama phakathi kweenkqubela phambili: 10
Faka inani lama-decimals, ngokuzenzakalelayo: 3
Khetha iphrofayili uza kufutshane (TN, Rasante, njl)
Bonisa i-reference point kwifom yeprofayili yakho (ubone umzobo)
60. I-LISP YOKUPHILA OKUVUMELELA UKUTHETHA UKUTHUTHUKISWA OKANYE NOKUPHILA KWI-POINT
Le ndlela iqhutywe kwi-Autolisp ne-Visual Lisp, ikuvumela ukuba ufumane ubude okanye inkqubela ye-polyline okanye i-axis uze uyifake kwimidwebo ngegama lokufaka.
Ukuze wenze oku kufuneka ukhethe i Somzobo onamacala amaninzi yaye zibonisa ukuba okuqhubekayo sisiqalo, kufuneka uqinisekise ukuba umyalelo ufumene loqalo lwencopho le Somzobo onamacala amaninzi ezichanekileyo (ukuqala axis), kodwa kunjalo, unako ukutshintsha isiqalo nomphini nge ukhetho kukunika lo myalelo.
Unako ukuguqula ezinye iiparamitha ngokuzenzekelayo kwi khowudi yomthombo, ezifana nokuphakama kwesicatshulwa ukuba kufakwe.
Gcina ukhumbule ukuba inkqubo yakho yokulungelelanisa imele ibe yinto enhle, ngaphandle koko i-error iya kuveliswa xa ibonisa indawo eqhubekayo okanye ubude ukufumana.
Faka igama lomyalelo: OPR
Khetha i-axis polyline okanye faka unobumba "C", ukutshintsha ukuqala kwe-axis
Faka inani lokuqala (okanye iqela eliphambili) lexabiso lokuqala kwipolline engagqibekanga: 0.00
Bonisa amanqaku kumgca ofuna ukufumana ubude okanye ukuqhubeka
61. I-LISP INDLELA YOKUSEBENZA KWENKQUBO YOKUSEBENZISWA KWEENKQUBO EZIKHULULEKILEYO NGEZIKOLO EZIKHETHEKILEYO (ISIKOLO)
Yindlela encinci kodwa eluncedo kakhulu ye-lisp ekuvumela ukuba ufumane ulwazi malunga nokusebenza ngeetekisi ezikhethiweyo, ngokucacileyo le mibhalo kufuneka ibe namanani amanani ukwenzela ukuba izibalo zenziwe, umzekelo: "2.22", "3.39" ( ngaphandle kokucaphula ), njl.
Ukuba phakathi kweetekisi zombhalo umyalelo fumana i-non-numeric text umzekelo igama elithi “dot”, liza kuthatha esi sicatshulwa njenge Xabiso le0.00, ngoko ke iziphumo babeya kutshintshwa.
Ulwazi olubonelelwe ngulo myalelo ngu:
Bala (Inani elipheleleyo lezinto ezikhethiweyo zeenombolo)
InaniUbuninzi (Inani eliphezulu lazo zonke iicatshulwa ezikhethiweyo)
InaniUbuncinci (Ixabiso elincinci lazo zonke iicatshulwa ezikhethiweyo)
Umyinge (Umyinge wee-text number ezikhethiweyo)
Sum (Isiphumo sazo zonke izicatshulwa ezikhethiweyo)
Ukufumana iziphumo kuphela Khetha nje ngomnye okanye ngefestile (iwindow) itekisi apho ufuna ukufumana ulwazi.
Faka igama lomyalelo: IV
Khetha zonke iindatshana ezibhalwe kuyo ofuna ukufumana ulwazi
62. I-LISP YOKUPHILA OKUHLAWULAYO ​​NOKUPHILA ZONKE IINDLELA EZIPHUMELEKILEYO
Le ndlela ivumela ukuba uhambe kuzo zonke iindawo kwaye uprinte nganye yazo kunye nokulungiswa kwiphepha langoku, kubalulekile ukucacisa ukuba ukusekwa kwesithuba sendawo akuyi kuthathelwa ingqalelo.
Umyalelo uhamba ngeendlela ezikhoyo kunye kwaye uqinisekisa ukuba yindawo yokumisela, ayikunyanzelwanga ngokuqhubeka nabanye, ngoko ukuba ufuna ukuba umzekelo wesithuba uprinte kwakhona, kufuneka uguqule umyalelo ekwaqwalaselwa kwakhona kwaye iphrintiwe.
Ungathabatha ithuba lomsebenzi walo myalelo, umzekelo, ukufaka iintloko zoonobumba, ukucima okanye ukongeza okubhaliweyo kuyilo ngalunye, njl. njl. Umyalelo awushicileli imisebenzi kwi "imvelaphi", ngaphandle kokuba kuchaziwe kwibhokisi yencoko yababini Khetha kwithebhu "Plot and Publish".
Ukuba uninzi lweefayili ukuprinta kwaye ngamnye kubo unamaxwebhu amaninzi (izakhiwo), unokwandisa ukusebenza kwalo myalelo ngolu hlobo lulandelayo:
Yakha ifayile ebizwa ngokuba Acad.lsp (ukuba ungenayo kakade), kule fayile faka le mizila elandelayo yekhowudi kuyo nayiphi na into yayo:
(defun s :: ukuqalisa ()
(layisha “Rhweba ngapha nangapha kwaye uprinte zonke izicwangciso.LSP”) ;Eli ligama lefayile encanyathiselwe.
Indlela ayibonakalwanga kuba iyaqondwa ukuba umendo wefayile ye-lsp ecacisiweyo yongezwa kwiikhomputha zenkxaso ye-AutoCAD (kuboniswe kwibhokisi yencoko yencoko), ngaphandle koko umgca wekhowudi unokutshintshwa olulandelayo (umzila opheleleyo wefayili ye-lsp ukulayisha ikhonjisiwe):
(layisha "C: \_\_ CONSTRUCGEEK \_\_ TUSLISP \_\_ Jikela ngapha kwaye uprinte zonke ii-layouts.LSP")
Ukusebenzisa le nkqubo ngokuqhelekileyo (ngaphandle kokuguqulwa) kufuneka wenze oku okulandelayo:
Faka igama lomyalelo: LPLOT
Kufuneka ulinde yonke imisebenzi yokuprinta ukugqiba.
63. I-LISP YOKUPHATHISWA KWEENKQUBO EZIFUNDA UKUBHALA II-TEXTS KULUNGELO KANYE NOKWENZEKA KWE-NUMBER OF CHARACTERS INDICATED
Le ndlela yokuvumela ivumela ukuba unqumle iicatshulwa ezikhethiweyo, unqume ukuya ngakwesokudla, ngakwesobunxele okanye kumacala amabini, oya kuxhomekeka kwinto eboniswe kumyalelo.
Umzekelo ukuba unombhalo wokuqala "0 + 580.00" kwaye ubonisa umyalelo wokunqanda abalinganiswa be2 ngakwesobunxele, umyalelo uya kuwutshintsha "580.00".
Ukuba uthetha umyalelo wokunqanda abalinganiswa be-3 ngakwesokudla, umyalelo uya kufaka indawo yombhalo wokuqala "0 + 580".
Ekugqibeleni, ukuba ubonisa umyalelo ukhetho lokucoca ngamacala amabini, iifayile ze-2 ngakwesobunxele kunye ne-3 ngakwesokudla, itekisi yokuqala iya kutshintshwa "580".
Njengoko uyakubona, bonisa nje inani leempawu eziza kunqunyulwa kwaye ukhethe izicatshulwa kwaye ezi ziyakunqunyulwa ngokubhekiselele kubonisiwe.
Faka igama lomyalelo: RET
Ubonisa ukuba yeyiphi na icala leetekisi eziza kuxutywa [Ekhohlo / Ekunene / Bobabini]
Faka inani labalinganiswa ukuba lihlanjwe kwicala okanye ngamacala
Khetha zonke iitekisi ofuna ukuzinqumla
Cinezela iqhosha lokungena okanye nqakraza iqhosha elifanelekileyo ukuze wenze indawo
IMIHLA YOSUKU uthi:
YINTONI EBONAKALISA UMBULELO EM BAIXAR NJENGOKU-LISP. NDIYA KUFUMANEKA KWI-SITE KWI-ESPHOL E AÍ TÊM DE COCURAR A VOSSA LISP EM ESPANHOL, I ASI TO FONT NESSA PAGINA ProcurEM NO FIM DA PAGINA AS SETAS PARA PASSAR À NEXT PAGE ATÉ NDOKUZUZA. KUMASEKELA E-FUNDA KUNYE NE-VOSSA LISP, KWI-FILES EMAHLA YOKUGQIBELA E-TEKSI OKANYE YOKUFUNDA.
YINTONI EBONAKALISA UMBULELO EM BAIXAR NJENGOKU-LISP. NDIYA KUFUMANEKA KWI-SITE KWI-ESPHOL E AÍ TÊM DE COCURAR A VOSSA LISP EM ESPANHOL, I ASI TO FONT NESSA PAGINA ProcurEM NO FIM DA PAGINA AS SETAS PARA PASSAR À NEXT PAGE ATÉ NDOKUZUZA. KUMASEKELA E-AKHAWUNTI YOKUHLAZIYIWA KWEENCWADANA NEZIBHENO NGE-AKHAWUNTI YOKUGQIBELA. NDIYAYITHETHA IAJUDADO
UGlen Sochackyj uthi:
Molo, ndingathanda ukwazi ukuba unayo nayiphi na ikhosi okanye uqeqesho lokufunda ukuqhuba inkqubo kwi-Autocad. Kwaye nokudala iapp lokusebenza elindincedayo ukubala kunye nokuchonga iseti yeepylylines
Iqhubela i-2017 inguqu okanye ngaphantsi. Akukho 2018 okanye 2019
boa noite .. gostaria yokwazi ukuphula i-37. Izinto eziguqukayo 3DFace em solids I-ACIS isebenza kuzo zonke i-versões i-auto cad?
mbulela i-yogot yo
Andizange ndilande i-lisp yakho
nceda undithumele i-lisp
peter perez uthi:
Ndiyathanda ukuba ndiyazi ukuba ndingayifumana njani loo milebe ukuba ikhuphe iinqununu zepolyli kunye enye yokufumana amacici e-polyline
DAVID GIRALDO uthi:
Ndisebenza njengomqambi we-P &ID kwaye ndifuna ukwazi ukuba ndingazenza njani iibhloko ezifanelekileyo endinazo kwisicwangciso se-autocad sokuthumela ngaphandle kwi-Excel.
Ndifuna ukukhipha loo nkcukacha kwaye ndiyibonise kwi-Excel. ukuba umntu unokuncedisa nceda
ich khangela eine SokufundaName, kuba ermöglicht die auf einer Polylinie beliebiger Stelle an x-eine Stationierung (ife Lange der dieser Stelle an Polylinie) anzuzeigen.
Ngokuqinisekileyo Sizakukuthumela i-imeyile malunga nokusebenza okufunayo kwi-lisp.
jose walter quiroga uthi:
Befuna Teketa ukuba ithambeka ie isangqa of radius othile ukusika egopheni kwinqanaba elilandelayo, usike Somzobo onamacala amaninzi ukusuka umthombo njalo njengoko ihamba kwenye indawo kukuba ukuyila indlela kwaye okufana kukhuphela izangqa nokuzoba babulele polylines
Andiyithandi loo nto. Kodwa ndathumela i-imeyile ekudakaleni kwe-lusp ukukuxelela ukuba unokuyenza
Kufuneka nocwangciso ukuba abele iimpawu ukuba ukuvimba izinto ezisisiseko, kwaye zizakuboniswa kwibhokisi yencoko yababini kwikhusi.
Ndilukhuphela njani uluhlu "Thumela ngaphandle amanqaku oLungelelaniso kwifayile ye-CSV"?
MARCO TULIO uthi:
UFUNA INKXASO yenu, ndinengxaki WAM ezindebeni AutoCAD Ayinakulayisha kuzikhelela ZOBUGCISA KWEDATHA ULUHLU (zilungelelanise, emacaleni,-engile)
Sawubona wonke umntu, apho ndifumana khona i-lisp
luhle kakhulu uludwe
neminikelo emihle kakhulu
I-Hail, vorrei I-Routine nominata I-AREASX, i-posebile.
Sawubona ndingathanda ukufikelela kwisiqhelo ukubeka i-progrsivas kulungelelaniso.
Ndingathanda ukukuthumela isimiso esilungileyo sokuthi angasasebenzi kunye nakwiinguqu zamandulo xa kusebenza, ndiyathemba ukuba ungayilungisa kunye / okanye ukuphucula, kwi-imeyili oyibonisa yona okanye xa uphendulayo ndiya kukuthumela isimiso somculo.
UDariel Fuentes uthi:
kwa kakhulu okuhle konke, Mna kufuneka arcos_de_una_polilinea_en_segmentos_lineales.fas zesiqhelo ngaphandle AutoCAD namaqhalo GEN 2015 enoba jike efunyenwe AutoCAD yaye ndiya kuyaphula kubahlisela komsindo. Ndiyabonga kakhulu Ndivela eCuba
Jorge Pereira uthi:
Sou português e gostava, se possível, de ter a rotina "UMGAQO OTSHINTSHA INDAWO YOMQULATHO WESIQINISEKISO NGECOTA YENQAKU EBONISWAYO".
; Ixesha eliqhelekileyo elithumela ngaphandle likhomba kwiifayile ze-CSV. 1.0 version.
; Ifom yefayili yamaphuzu ayenzayo: P, N, E, C (Point, North = Y, East = X, Ubukhulu = Z)
Khangela kwiphepha likaMario Torrez
Nceda ungandixelela apho ndingakhuphela khona indlela yakho ye-lisp "Thumela ngaphandle amanqaku oLungelelaniso kwifayile ye-CSV" kuba ndinombono wendawo kwaye kufuneka ndiyikhuphele ngaphandle kwi-csv okanye kwi-txt amanqaku afakwe njengokubhaliweyo (umxholo bubude). ) kwaye kulungelelwaniso u-Z uphuma u-zero, uyifumene?
Ngaba uncede uncede
URAY MARTÍNEZ uthi:
Ndingathanda i-lisp kunye nomsebenzi othi "Susa izinto zangaphakathi okanye zangaphandle kwi-polyline ekhethiweyo", kuba kwinqaku andinakufumana ikhonkco lokukhuphela.
I-WALTER MANUEL GIRON YARLEQUE uthi:
Dieco Huaman uthi:
Sawubona, ndingathanda ukwazi ukuba kukho isimiso sokufumana inani lezinto uze uzibeke kwisicatshulwa
Mthandi, ndizama ukukhuphela enye indlela kwaye ndishiye le saziso:
I URL eceliwe / ingxoxo yeforam / njalo-Teketa-to-add-thabatha-o-los-namagugu itekisi-ekhethiweyo alufumanekanga kule seva.
Ukongezelela, i-error ye-404 Not Found yadibana nayo ngelixa izama ukusebenzisa i-ErrorDocument ukujongana nesicelo.
Ndiphosakelephi na? 1000 mbulela iNkosi
Sawubona, ukuba umntu uyazi i-lisp evumela ukuba udwebe i-polygon ukwazi, ubude kunye nama-angles, ukuba umntu uyazi, isimiso se-topo12 ukuba banokundithumela i-imeyili juanpaulo_100@htomail.comNdiyabonga kakhulu abahlobo
Idatha efanelekileyo yedrax…. : p
Luis Orlando Mamani uthi:
Ngomhla, ndingathanda ukwazi isiqhelo se-autocad 2014 ukuba ngaba benayo ukuvelisa amatafula ukuya kwinqanaba leendlela kunye nokuyila kweendlela
luncedo kakhulu ekuphuhlisweni kweeprojekthi zobunjineli
Ndiyangxengxeza peuden ukuncedwa Teketa ukunciphisa i Somzobo onamacala amaninzi kunye km yalo, ndiya kuthetha ukuba abe Somzobo onamacala amaninzi kba DM of Incio 100 kunye nesiphelo DM 1000, ukuba bamakishe nayiphi na indawo apha kule Somzobo onamacala amaninzi kwaye Ndilahla nam DM yakho ushiye kucaciswe.
ngoku ukuqala nokuphela dm kuya kuhlala kuhlukile kwiprojekthi nganye
ukuba banokundinceda ndiza kubabulela kuba ndisebenza nale nto rhoqo kwaye kuya kuba luncedo kakhulu kwiiprojekthi zendlela.
Imibuliso umntu kukunceda mna kunye Teketa ukukhonkca uphando olwenziwe arbitrias ilungelelanise kumanqaku amabini, ngoko ngasentla zilungelelanise yokuqala obekwe nasempuma, ekuphakameni ushiye nabo arbitarias efanayo iingongoma ezimbini zokuqala ngoko akazange ngokubambisana kodwa ubukhulu buya kutshintshwa
Sawubona, uyabona kule khasi:
ichaza indlela yokufikelela kwi-database yakho kwaye wenze izinto kuyo, izisa isethi ye-lsp routines kunye ne-pdf echaza indlela yokuyisebenzisa.
Bhota, ndiyamangaliswa ukuba nabani na uyayazi unocwangciso encinane okanye nayiphi umzekelo ocacileyo we ucwangciso encinane ukwenza uvimba DBF kwaye udibanise data kuyo okanye kokucima evela AutoLISP.
Ndiyathemba ukuba unceda.
CECIL ALFONSO uthi:
Molweni zihlobo Ndingathanda ukwazi ukuba nabani na uyazi ukuba ucwangciso ukulinganisa (ngethemba lwangaphandle) eliyi buyimilo kunye nomgama balo ukuba kakhulu ukucela abo zathunyelwe Excel.
ana gaarcia uthi:
Ungabhala njani i-.lsp isimiso esisebenza xa umzobo we .dwg ulayishiwe kwaye xa ubhalwa?
Ndifuna uncedo ukuze ndibone ukuba umntu owaziyo uyangilondoloza.
Ndifuna ukuthekelisa kwi-3 yoluntu yonke iinqanaba eziphambili eziveliswe kwiifayile zetekisi, ndifuna nje ukubonisa i-mileage, umgama ukuya kwi-axis, kunye nezinga elihambelanayo.
Km, ukusuka kwi-axis, iCota
Kuphela Ngaba umntu unokundinceda? Andazi iinkqubo zilch ukuze ucele uncedo.
Makhe sibone ukuba ndiyiqonda.
Utsho ukuba kunye ne-lisp yakho uthumela ngaphandle i-i-Excel
Ngaba umbeke kude? Andiyiqondi loo nto, ndicinga ukuba ku-AutoCAD njengento okanye umsebenzi kwi-lisp?
Kodwa ukuba sele unayo uququzelelo e Excel, kutheni wena wenze kumhlathi elilandelayo ifomula bakaPythagoras phakathi ngongoma kunye elilandelayo?
ingcambu yesikwere se ((y2 coquate - y2 coquency) squared + (x2 coquency - x1 coordinate) squared)
Molo Molo, NDIFUNA andincede ndilwe A SokufundaName. CHAZA, mna ukuba sineplani zokusampula Kukho konke rough WITH SokufundaName EXPORTA equlathe uququzelelo ukuya Excel, kodwa ngoku phakathi ingongoma nganye nendawo, ze umgama, Ngoku ndifuna ukuchitha imali KULE PHAKATHI INGONGOMA YPUNTO ngokugqwesa FOR NOT BE kunokuchwetheza 400PUNTOS amabanga ikhona indlela? NCEDA, yenza kakhulu MNA SO AVANZO msebenzi ngokukhawuleza.
UTHANDA NGOKUSUKA KOMHLABA
Ukufeza i-routp ye-Lisp, iGeCivil inikeza isifundo esihle kakhulu.
Sawubona, ndingathanda ukwazi ukuba kukho nayiphi na inkqubo eguqula indiza ye-autocad kwenye inkqubo yesetyenzisiweyo ngokomzekelo ukusuka ku-wgs84 ukuya kwi-psad56
Idibeneyo Iindlela zokudweba iiprofayili zangexesha elide, ezitshintshileyo, ukungena kwamanye amazwe kunye nokuthumela ngaphandle ngaphandle kweenkonzo, ezahlukahlukeneyo, ilayibrari yebloko.
Ngaphakathi kwincwadi eneenkcukacha, zixhobo zokufakelwa.
Ifayile yokusebenza iya kufakwa kwifayile eyintloko.
Ngaphakathi kwincwadi eneenkcukacha zincwadi zikunceda iifayile.
Qaphela: ngenxa yemicimbi yokuxubusha, incwadana ehlaziyiweyo isusiwe kwaye imifanekiso emininzi isusiwe kwinqununu encedisayo.
Incwadana ehlaziywayo ingacelwa ngeposi ukuba
ukuba izicelo ziyinzuzo, okanye zihlalutye ukusebenza kwemithetho ngokwabo.
Sebenzisa umyalelo wokuhamba
kubonakala kukho ukhetho lokufaka iifom
Ndingayifaka njani i-vertices kwi-polyline?